Kutsanya kunofanira kuyeukwa here muHalacha mukurangarira kuurayiwa kweHolocaust? (Koramu 4) - Rabhi Michael Avraham
Kutsanya kunofanira kuyeukwa here muHalacha mukurangarira kuurayiwa kweHolocaust? (Koramu 4)
18 makomendi	/ Tu Elul 18 - 09/2016/XNUMX 18 / 09 / 2016
Gore rega rega mubvunzo unomuka wekuti sei vachenjeri vasingamisi zuva rekutsanya kana zuva rekurangarira mukurangarira Holocaust. Kana vakatsanya vachirangarira kupondwa kwaGedharia Bheni Ahikamu kana kuti kuputsika kwemasvingo pakukombwa kweJerusarema, sezvingabvira zuva rakadaro rinofanira kuiswa mukurangarira Kuparadza Kukuru, uko kwakanga kusati kuri kwechienzi nengwavaira, uye kwatiri zvakawanda zvemusoro uye zvinobata bata. Mhinduro dzinowanzo tenderera pamubvunzo we halakhic chiremera nesimba. Vamwe vanoomerera pakuti isu hatina sangano rinokwanisa (Sanihedrini) rinogona kugadza zuva rinosunga reKlal Israel. Vamwe vanoti izvi zvinokonzerwa nehudiki hwedu (kuderera kwezvizvarwa zvinorangarirwa zvakanaka). Zvikonzero izvi zvinonzwika sezvisina kunaka. Kana Purim Frankfurt kana Casablanca inogona kuiswa, uye kana ma legumes kana mafoni efoni kana terevhizheni inogona kurambidzwa, saka pane zvichida chiremera uye kune simba rakakwana halakhic kugadzira mitemo mitsva kana ichidiwa.
Vazhinji vanozviona sehalachic Yvonne, uye ndinofunga kune huwandu hwakaringana hwekururamisira mairi. Zvechokwadi pane kusada pano kubva kune itsva, zvimwe tsananguro dzingaputswa. Kutya kwekuchinja kana Zionism (muchikamu chinotevera vachatanga kupemberera Zuva reIndendence muIsrael). Asi ini ndinoda kupa maonero akafara uye akasiyana pano, pamubvunzo uyu.
Ndakaenda kune imperialism
Chinhu chakakosha mudzidzo yechitendero chedu tese kuzara kwe halakhah. Inofanirwa kutenderedza zvese, nyika yese inokudzwa uye pane nzvimbo isina munhu. Zvese, uye kunyanya zvinhu zvakakosha, zvinofanirwa kupfuura nemu halachic test reactor uye zvakare ndezvayo. Rimwe divi remari nderekuti hapagone kuve nehukoshi hwakakosha kana zviito zvisingapinde mu halakhah uye kuita chikamu chayo.
Semuenzaniso, vazhinji vari kutsvaga chirevo chemagariro nehupfumi che halakhah. Is halakhah social democratic, capitalist (hint: iyi ndiyo mhinduro yepedyo) kana communist? Morning News inoburitsa chinyorwa chinodaidzira kuti sei socialist halakhah, inotsigira kururamisira kwekugovera, capitalist, communist nezvimwe zvakadaro.
Fungidziro yakajairika yezvinzvimbo zvese izvi ndeyekuti halakhah zvirokwazvo chimwe chinhu cheizvi zvese. Ndinoda kuramba pano fungidziro yakajairika, uye zviite pamatanho maviri: a. Ini handifunge kuti zvinogoneka kutora kubva mu halakhah chirevo chisina kujeka pane izvi nezvimwe zvinhu zvakafanana. B. Hapana zvakare chikonzero chekuita izvi. Iko hakuna chikonzero chekuti halakhah ive nekutaura kwakadaro. Ini zvino ndichaedza kutsanangura zvishoma.
A. Ko halakhah ine chirevo chakajeka chepfungwa here?
Halacha muunganidzwa wezvakawanda zvirevo zvakashanduka pamusoro pezvizvarwa, munzvimbo dzakawanda uye pasi pemamiriro akasiyana uye nevanhu vakasiyana. Iyo haisi nguva dzose iine kubatana mune meta-halachic ndege. Somuenzaniso wokukwereta, tichatora mitongo yaMaimonides panhau yemharidzo. Kunyangwe vachifunga kuti vane halakhic kuenderana, ivo vangangove havachengetedze meta-halakhic kuenderana. Sezvinozivikanwa, pane kusawirirana pakati peBeit Midrash yaRabbi Akiva naRabbi Ishmael maererano nemaitirwo eTorah inofanira kudiwa (yeRish - yeruzhinji neyakavanzika, uye yeRA - yakawanda uye vashoma. Ona Shavuot XNUMXa neinofambirana nayo. ) Pane nyaya dzakati wandei dzinounza zvakasiyana halakhic zvinoreva kune iyi meta-halakhic gakava. Maimonides anotonga pa halakhah pane dzimwe nyaya idzi, uye sezvandakatoratidza kune dzimwe nzvimbo zvinobuda kuti dzimwe nguva anotonga semafungiro e halakhic anovimba nemharidzo yeruzhinji uye yakavanzika uye dzimwe nguva anotonga semafungiro anovimba nehuwandu uye hushoma. Iyo haichengetedze meta-halakhic kuenderana.
Ini ndinofunga kuti halakhah kazhinji inogona kunge ine halakhic kuenderana (uye ichi zvakare chirevo chakawedzeredzwa mumaonero angu), asi hairatidzike seine meta-halakhic kana ideological consistency, kureva kuti inoratidza kurongeka, communist, capitalist kana zvimwe. socio-economic sub-theme. Zvinyorwa zvakasiyana zvinotitora kune mhedziso dzakasiyana, kwete dzose dzinosunga, kwete dzose dzinoshanda mumamiriro ese ezvinhu, kune kududzirwa kwakasiyana kune vazhinji vavo, saka hazvibviri kubvisa kubva kwavari mishnah yakarongeka. Dzimwe nguva hazvigoneki kuburitsa mutongo wakajeka we halakhic, asi hazvina basa nekurongeka halakhic meta.
Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti dambudziko harisi kuoma, kuwanda kwezvinobva, kana chero imwe kuoma kuita kudaro. Ini ndinopikisa kuti pamwe hakuna chinhu chakadai se sub. Chero ani anotora mishnah yakadai kubva mu halakhah mumaonero angu anoinyengedza, kana kuti anotoita gakava rekududzira kusika. Sechiratidzo, handifunge kuti ndinoziva nezveavo vanobata nezvenyaya idzi vakanyatso shandura zvimiro zvavo zvepfungwa zvichitevera chidzidzo che halakhah (kunze kwechimwe chiitiko chavanowana chirevo che halakhic chakajeka). Hurukuro yakadaro haimboendi sechinangwa chekumisikidza mushure mekupfura nemuseve. Ani nani ari wesocialist achawana muTorah socialism yake, uye zvakafanana ndezvechokwadi nezve capitalist kana chero mumwe wesocial-economic ari pasi. Izvi zvinomutsa fungidziro yakasimba yekusavimbika kwenjere. Vanhu vanofungidzira kuti panofanira kuva nechinzvimbo chesocial-economic in theory, vanowana chigaro chakadaro mukati mavo, vobva vatanga kushandisa hunyanzvi hwekuturikira husingagutsikane, zvirevo zvinosarudzwa kubva kune zvakasarudzwa uye nezvimwe zvakadaro, kuti vawane chimwe chinhu chakasimba kubva mukuvhiringidzika uku.
Ndichawedzera mumwe mubvunzo kumucheto kwemazwi angu: Ngatitii chokwadi ndakanga ndabudirira kubvisa kubva mu halakhah yakarongeka ideological-socio-economic subdivision, izvozvo zvinofanira kundisungirira here? Nyaya yekuti mimwe mitemo inotsigira imwe pfungwa yemagariro nehupfumi haindimanikidzire kuitora. Ndinogona kuzvipira uye kushandisa mitemo iyi (kana iri kusunga) pasina kutora pfungwa yepasi. Zvazvinoreva ndezvekuti kana fungidziro iyi iine mimwe mhedziso isina kutaurwa mu halakhah se inosunga - ini handinzwe ndichisungirwa kwavari. Kunyanya ini ndinogona kutaura kuti iniwo ndine meta-halachic kusawirirana. Ndatoratidza kuti ndiri pakanaka panyaya iyi, aiwa?
Zvinoita kwandiri kuti kunyangwe halakhah iine chido munzvimbo idzi, chirevo chakanyanya kutendeseka chandinogona kutaura nezvazvo ndechekuti halakhah inoda kuti isu tishandise pfungwa uye tiite zvine hunhu uye zvine musoro. Kubva zvino zvichienda mberi, munhu wese achazvisarudzira izvo zvine musoro uye zvine musoro uye kugadzira yavo yemagariro nehupfumi maonero. Maonero aya ndiko kuda kweTorah neHalacha kubva mairi. Asi izvi ndezvechokwadi chete padanho rekutanga, chero bedzi isu tichifunga kuti kune chokwadi halakhic chido kubva kwatiri munzvimbo dzakadaro. Iye zvino tichaenda kune yechipiri nhanho.
B. Panofanira kuva nechimiro chepfungwa chakajeka mudzidziso here?
Zvino isu tinofanirwa kuzvibvunza kuti sei zvachose tichifunga kuti panofanirwa kuve nenzvimbo yepfungwa mudzidziso pamibvunzo iyi? Ini handinzwisise iyi halakhic imperialism, uye kune zvakanakisisa zvekutonga kwangu haina mvura. Hakuna nzvimbo yakadaro uye haifaniri kuvapo. Kwete chete nekuti halakhah inoitika isingaite nemibvunzo iyi, kana nekuti zvakaoma kutora chinzvimbo kubva mairi nekuda kwematambudziko akasiyana (ibid.), Asi pamwe nekuti (= iyo halakhic muunganidzwa?!) yakasarudzawo (zvichida nekusaziva) ) kusabatanidzwa mazviri uye kusasarudza pamusoro pazvo. Haavaone sehunhu hwake saka ini ndinovasiya kunze kweumambo hwake.
Ndinoda kupa pano imwe thesis kune inogamuchirwa. Isu tose tiri vanhu, uye chikamu cheboka revanhu maJudha. MuJudha ndiye wekutanga uye mukuru munhu uye ipapo muJudha, sezvakataurwa naMuharram Tzitzaro Zatzokal: "Hapana chinhu chemunhu chisingazivikanwi kwandiri" (ibid., Ibid.). Panguva imwe chete nekupatsanurwa uku pakati pemauriri maviri, zvinogoneka zvakare kupatsanura kukosha kwenyika (yechiJudha!?) kuita nhurikidzwa mbiri: 1. Iyo yepasirese pasi, ine hunhu hwepasirese kune rumwe rutivi uye hunhu hwemunhu pauriri. zvimwe. 2. Iyo chaiyo halakhic floor yemaJuda.
Iyo yekutanga pasi ine hunhu husingade kuverengerwa muHalacha. Vamwe nokuti vanosunga zvose zviri munyika uye kwete chete (pasi rose) vaJudha, uye vamwe nokuti kuvapo kwavo kunofanira kuitwa nokuzvidira uye mumwe nomumwe uye kwete nenzira imwechete inosunga isu tose sezvinodiwa munharaunda ye halakhic.
Joke rinozivikanwa nezita reRabhi wekuPonivez uyo akaturika mureza padenga rePonivez yeshiva muBnei Brak zuva rega rega reIndependence uyewo haana kutaura chikumbiro, asi haana kutaura rumbidzo. Mwari paakataura nezvazvo kuti aive muZionist saBen-Gurion, Ben-Gurion haana kuti kurumbidza kana kuteterera. Vakawanda ve-ultra-Orthodox vandakanzwa vanonakidzwa zvikuru nejee iri pamutengo weZionists mapenzi uye akaipa, asi handifungi kuti vakapinda muhupamhi hwezvinoreva. Vavariro yarabhi yakanga iri yokutaura kuti akanga ari muZioni wenyika, sezvakangoita Ben-Gurion. Zionism yake haisi yechitendero, asi kukosha kwenyika, uye nekudaro akazvipira kwairi kunyangwe asina kupinda muHalakhah. Zuva reIndependence izororo renyika renyika rinopembererwa narabhi wePonivez, uye akange asina kufarira kuripa chimiro chechitendero nekuchisimbisa mumitemo yeHalakhic.
Kudzokera kuHolocaust Remembrance Day
Nhasi, vanhu veIzirairi vanorangarira Kuparadza Kukuru nenzira dzakasiyana-siyana, dzimwe dzadzo dzakanyorwa mumutemo uye tsika dzemagariro evanhu uye dzimwe dzacho dziri munhu mumwe nomumwe. Idzi nzira dzakadai seidzi dzinoita kwandiri dzinogutsa zvachose, uye handiwani chikonzero kana chikonzero chekudzimisa mumitemo ye halakhic, kunyange kana nhasi pane dare rinokwanisa raigona kuita kudaro. Ivo ndeveuriri hwekutanga hwehuviri hwarondedzerwa pamusoro apa, uye hapana chikonzero chekuvaendesa kune yechipiri. Holocaust Remembrance Day izuva renyika risina chitendero, uye hapana chakaipa nazvo. Haisi kurasikirwa nekukosha kwayo, uye hachisi chokwadi kuti zvinhu zvose zvakakosha zvinofanira kuiswa mu halakhic kana kunyange yechitendero.
Nenzira imwecheteyo, paZuva reKuzvitonga, zvirokwazvo ndinoti kurumbidza kuna Mwari uye kurumbidza Mwari, asi ini handirioni sezuva rekukosha kwechitendero uye zvechokwadi kwete halakhic. Zvazvinoreva ndezvenyika, uye ini semuZionist wekunyika (saRabhi wePonivez naBen-Gurion) ndinojoina pahwaro uhwu ndoga. Handitauri Hillel nokuti Mutungamiriri Mukuru akatonga kuti Hillel anofanira kutaurwa, uye izvi hazvisi chete nekuda kweukama hwangu hunozivikanwa nesangano iri. Ndinoti kurumbidza nokuti ndinofunga kuti zvakanaka uye zvakanaka kuita kudaro. Iyi ndiyo nzira yangu semunhu anonamata kuratidza chimiro changu chenyika.
Saka chii chaiva munguva yakapfuura?
Kare, ivo vakanyatso simbisa kukosha kwese uye kukosha kwese kusungirwa mu halakhah. Vachenjeri nedare ndivo vakatara mazuva ekutsanya nekufara nenguva dzedu. Asi ndinofunga kuti mhedzisiro yemamiriro ekunze umo musina mambo muIsraeri. Munyori wemharidzo dzarabhi anotaura nezvemaitiro maviri ehurumende akafanana, mambo nedare. Nokuda kwechimwe chikonzero mumatsime eVachenjeri hapana kana chirevo chehurongwa hwamambo chinoonekwa. Dare redzimhosva riri kugadzirisa migwagwa nenguva (sub-MOC), zvichireva kuti vaive Bazi rezvekutakurwa kwezvinhu. Ivo vanogadzirisa mirau uye vanomisa maitiro, mitemo yekuvhota munharaunda inotarwa ne halakhah uye inoonekwa muShulchan Aruch. Ehe, ivo vanodawo mvumo yemunhu akakosha (= arbitrator). Asi ndinofunga kuti mhedzisiro yekuti Toshba'ap yakaumbwa panguva iyo pakanga pasina mambo muIsrael, uye simba rehurumende yenyika rakapfuura kubva kuna mambo kuenda kuBID huru. Naizvozvo vatungamiri veSanihedrini vakanga vari vorudzi rweimba yaDhavhidhi, sezvo vaimboshanda semadzimambo. Kubva ipapo kusvika nhasi tave kujaira kuti hakuna nyika yenyika uye zvese ndezvevanopokana nedare uye zvechitendero chedu uye halakhic dimension. Panzvimbo yekuti mambo asarudze maitiro edu kupfuura halakhah, BD inorova uye kuranga zvisiri izvo. Chiremera ichi cheBID chiratidzo chesimba ramambo muhurumende yekutanga.
Sechikamu chechinhu chimwe takajaira kuti zvese zvaive Torah uye zvese zvakaenda. Kuti hakuna hupenyu hwakajairika hwemunhu, uye zvechokwadi hapana kukosha, kunze kwe halakhah. Kuti zvese zvinofanirwa kufambiswa uye zvinotemwa nevanopikisa uye varabhi. Asi nhasi pane mukana wekudzoka kumuitiro. Vanhu veIsraeri vane chimiro chenyika chenyika muBH (BH kwete pamusoro penyika asi pakudzoka kwechimiro chenyika choupenyu hwedu tose. Vamwe vakanongedzera kwachiri sokudzokera kwedu kuchinhano chenhau). Hapana chikonzero chekuramba takanamatira kune chimiro chatakajaira nekuda kweakasiyana enhoroondo pathologies.
Mukupedzisa, zvinopesana nemafungiro aripo, kutapwa hakuna kungoderedza munda we halakhah (kunyangwe izvi zvakaitikawo mune zvimwe zvinhu) asi zvakare zvakawedzera kupfuura kudzidza kwakakodzera mune mamwe minda. Mumwe anofanirwa kudzoka kumaitiro uye kwete kunetsekana nezve chinzvimbo che halakhah nekureva kwe imperialist kwairi uye nemativi ayo uye oita kuti itore pasi pemapapiro ayo nzvimbo dzese dzehupenyu hwedu. Kudimikira hama dzedu dzechiKristu, ngatirege kuenda kugehena: kupa mutemo zvaunazvo, uye mambo (kana munhu) zvaanazvo.
Pamusoro perusununguko rwekutaura, kurambwa kweHolocaust uye "Iwe usatendeuka" ( koramu 6)
Mutemo Wezvivakwa muHalacha uye Mutemo
Holocaust Appropriation uye Sectorality - kuna Adi Ofir (Haaretz Books - 2001)
18 Pfungwa pa “Panofanira kuve nekutsanya here muHalacha mukurangarira kuurayiwa kweHolocaust? (Koramu 4) ”
29 Elul 09 - 2016/14/53 naXNUMX:XNUMX
Haufungi here kuti kunyangwe mishnah yakarongeka isingawanikwe muHalacha sezvayakaumbwa muzvizvarwa, munhu anogona kuwana imwe muchikamu cheTorah yakanyorwa? Ndakaona mubhuku renyu Mwari vachitamba madhayisi kuti munoti Bhaibheri harisi nezvetsika asi nezvetsika dzechitendero. Kureva, maererano nemashoko ako (kusvika pakunzwisisa kwangu) chiJudha chese, Torah yakanyorwa uye Torah yemuromo ndeyechikamu chinobuda kubva kuhupenyu hwetsika hwemunhu uye inowira muboka re "chitendero". Uye ndinobvunza kuti chii icho chikamu che "chinamato", chinorevei? Kungori chimwe chinhu chinopokana pasina chero pfungwa kune munhu anochichengeta? Uye kuti chero ani anofunga kuti pane poindi mumitzvos hazvireve kuti ivo vanofanirwa kuiswa padanho rinoenderana uye rine chekuita nemunhu / nzanga / vanhu? Uye izvo, semuenzaniso, hazvigoneke kutora kubva kumitzvah yeshemita yehupfumi nheyo sezvakaitwa naJabotinsky?
Zvinoita sekuti danho riri kutaurwa pano rinofanira kuenderera mberi nhanho imwe. Kwandiri, kudzingwa hakuna kungogadzira huchenjeri hwechitendero asi kazhinji kwakagadzira chikamu chechitendero, chikamu chisipo muBhaibheri. Mirairo yakapiwa kuti nyika ibatsire kutanga uye zvikuru "kuita saizvozvo pakati penyika." Ini ndinofunga kuti kutsanya kwatiri kubata iko zvino kunofanirwa kubatwawo sezvauri kutaura kubata Holocaust Remembrance Day nhasi, padanho renyika.
Ndinoda kureferensi yako.
Ini ndinofunga chekutanga chechokwadi hauwane. Kuedza kwakaitwa hakuna chokwadi. Zvakakosha kuti tisaregeredza chokwadi uye kuzviisa pasi kune zvido zvedu (kunyange kana zvakakodzera uye zvakanaka). Ndinofunga kunyangwe muTorah yakanyorwa ine amorphous. Ehe hunhu hwepasirese hunobvumirana nemunhu wese pauri huchawana kwese. Asi kudzidza kweTorah kana Halacha hakuiti, mumaonero angu, kushandura chero chinhu mumaonero awakazvigadzira iwe (uye ichi ichokwadiwo mumaonero angu, kuti vanhu vanowana zvavanoda).
Ndinobvuma kuti muVachenjeri pakanga pasina mutsauko pakati pehunhu nechitendero uye pamwe muRishonim zvakare. Neimwe nzira kutapwa kwakagadzira musiyano uyu (uye kazhinji, nhoroondo ye halakhah ndiko kusikwa kwemisiyano yakanga isati yavapo. Yekupedzisira inoita pfungwa dzisiri mumishnah zvichingodaro). Asi mukuona kwangu chirevo chekuti nyika iri kufambira mberi (uye kwete kudzoka). Isu ikozvino tinonzwisisa kuti kune marudzi maviri ehutsika, ayo akawanda evatenzi vedu akaonekwa pakati pavo. Chiratidzo cheizvi (chinotibatsira kuona zvavasina kucherechedza) ndechokuti tinoona nhasi kuti zvinokwanisika kuva netsika kunyange pasina kuzvipira kwechitendero. Saka nei uchifunga kuti kuzvipira kwechitendero kune zvinangwa zvechitendero? Nemaonero aya zvakanyanyisa nhasi.
Kana iri dudziro yezvinangwa zvechitendero, iwe unofungidzira kuti hapana hunhu huri kunze kwehunhu hwehunhu. Uku ndiko kufungidzira kwandisingaoni hwaro, uye kwete kana uchitarisa Tora neHalacha. Kune chikamu chakakura kwazvo chezvinhu zvinoratidzika kwandiri kuti kurongeka kwetsika hakugone kuwanikwa. Saka nei tichifunga kuti munhu wese akagadzirirwa tsika? Mukuona kwangu kune zvakare kunamatira kune zvishuwo zvemoyo uye kusakoshesa chokwadi.
1. Zviri pachena kuti alibi chidzidzo chebhaibheri, kana bhaibheri asi strata yakasiyana inomiririra zvikoro zvakasiyana uye maonero enyika, hapana chekutaura pamusoro pacho. Asi kana tikabvuma chiyero chezvakazarurwa cheBhaibheri, zvirokwazvo mukuona kwangu imwe nzvimbo inogona kuumbwa kana kunatswa muchiedza chekudzidza mavhesi. Semuenzaniso hukama hweBhaibheri nehumambo inyaya yandinofunga kuti inogona kukurukurwa nezvayo netsananguro yekududzira. Somuenzaniso, ndinofunga kuti Maimonides, uyo akaona mukutongwa kwamambo tsamba yokugadzwa kwamambo muna Israeri, akafuratira revo iri nyore yeganhuro rose imomo. Isu tingasakwanisa kugonesa mumwe ane chokwadi nezvechinzvimbo chake (sezvo isu tisingazogutsi Dawkins) asi zvirokwazvo, ndinofunga kuti kudzidza kwebhaibheri kunogona kutungamirira kune mitsva mitsva panyaya dzakawanda. Kazhinji maonero angu ndeekuti hapafanirwe kupokana pakati pehunhu hwevanhu uye nezvakanyorwa muTorah sekuchema kwaAbrahama akatarisana nekuparadzwa kweSodhoma. Naizvozvo ndinofunga kuti chokwadi Bhaibheri rega harina kukwana kugadzira pfungwa yehunhu kubva mukutanga asi rinobatsira.
2. Handinzwisisi kuti chokwadi chokuti zvinobvira kuva netsika pasina kuzvipira kworudzidziso chinoratidza sei kuti kune mapoka maviri. Handisi kutaura kuti vechitendero chete ndivo vane tsika asi kuti chinangwa chemitzvos ndecheboka rimwe chete. Icho chokwadi chekuti munhu haagone kunzwisisa nguva dzose kuravira kwemitzvos hakudi kutorwa kwechikamu che "chinamato". Dzimwe nguva isu tinoshaya mamiriro enhoroondo kuti tinzwisise tichipesana neizvo zvakakosha zvakaonekwa asi izvi hazvireve kuti chikonzero chehunhu hachipo. Kunyanya sezvo iwe usati wandipa tsanangudzo yakanaka ye "kukosha kwechitendero." Panguva ino, handigone kufunga kuti kune chikamu che "chinamato" chandisingazive kuti chii chinonzi "kuzadza maburi".
1. Panofanira kunge pasina kupokana, asi mubvunzo ndewekuti pane mukana wekuvandudzwa. Munhu anogona here kuwana fundo yeBhaibheri isingagamuchiriki kwaari ndokuchinja mirangariro pashure pefundo yake. Handifungi kuti izvozvo zvinoitika. Abarbanel akaramba umambo akawana kunambwa kwake muBhaibheri, uye Maimonides uyo asina kuramba akawana kunambwa kwake. Zvimwe chetezvo ndezvechokwadi nhasi.
Zviri pachena kuti chero chidzidzo mune chero chikamu uye mune chero bhuku kana firimu inovhura mibvunzo uye inogona kuchinja maonero. Asi shanduko ichaitwa mukati memaitiro uye kwete nesimba remuBhaibheri (kuti sezvo ndawana mhedziso yakasiyana ipapo ndinozvimanikidza kushandura chimiro changu pane imwe nyaya).
2. Handina tsanangudzo yekukosha kwechitendero. Asi semuenzaniso ndinotaura kuti mhosva yemudzimai waCohen uyo akaedzwa kuparadzana nemurume wake hairatidziki kwandiri kuva mutero wechinangwa chetsika. Chinangwa chayo ndechekuchengetedza hutsvene hwehupirisita. Ichi chinangwa chechitendero uye cheunzenza. Kunyange kurambidzwa kudya nyama yenguruve hakuratidzi kwandiri sechirambidzo chine chinangwa chetsika. Nguva dzose zvinogona kutaurwa kuti pane chinangwa chetsika chatisinganzwisisi tose. Ichi chirevo chisina chinhu, uye handioni chikonzero chekufunga kudaro.
Nharo yangu yaive yekuti kana chinangwa chemitzvos chine hunhu, saka mitzvos haina kusimba (zvirinani nhasi). Mushure mezvose, chinangwa chetsika chinogona kuwanikwa kunyange pasina ivo (uye kune izvi ndaunza uchapupu kubva kuvanhu vane tsika vasina kusungwa ne halakhah). Saka zvinobatsirei kuchengeta mutemo? Iva netsika uye zvakakwana.
1. Asi nhasi ndinogona kuuya ndokusarudza pakati pegakava riri pakati paMaimonides naAbarbanel ndoona kuti murangariro waMaimonides unoratidzika kuva uri kure nokupfava kwendima maererano nezvishandiso zvokududzira zvefundo yeBhaibheri. Izvi hazvireve kuti ndinozvimanikidza ini asi sezvamakatidzidzisa (sezvandinozvinzwisisa) maererano nemaitiro ekugadzira hapana chinhu chakadai sekuchinja kwechinzvimbo zvakananga kubva pamakakatanwa asi chete kubva mumuitiro wekutaura. Naizvozvo ini ndinofunga kuti kuverenga ndima idzi nekutenda kuti ichi chinyorwa chine chiremera chinogona pakupera kwechirongwa ichi kusarudza mukufarira shanduko yemaonero.
2. Zvakare handinzwisisi kuti sei kugadzira chikamu chisina tsananguro chisina chinhu pane yangu nharo yekuti isu hatina kuwana zvese zvinobatsira zvemirairo. "Kukosha kwechitendero" kusvika ikozvino hazvireve chero chinhu kwandiri, zvinoita sekuzadza maburi. Nezvemubvunzo wekuti sei kuchengeta mitzvos kana zvichikwanisika kuve nehunhu pasina mitzvos. Ndinofunga kuti zvinogoneka kuti ndipindure kuti ne mitzvo zvinoita kuti munhu ave nehunhu, kana kuti ndozvairehwa nevachenjeri pavakati mitzvo inoshaya ramangwana. Ini pachangu ndinofunga kuti zvechokwadi mamwe emitzvos apedza basa ravo rekare seuranda uye vamwe vachiri kumirira kuzadziswa kwavo.
1. Zvadaro sarudza. Mubvunzo ndewokuti sei zvisingatendese avo vanofunga zvakasiyana newe? Naizvozvo handina chokwadi nezve kugona kugadzira maonero uye hunhu kubva muBhaibheri uye Halacha. Kwauri zvinoita seAbhabhabheri asi zviri pachena kwandiri kuti imhaka yekuti hausi wehumambo. Taura nehumambo uye iwe uchaona kuti vanoburitsa masaini uye vanoratidza maonero akasiyana (izvo zvinopesana nezvaunonyora mumaonero angu ane nzvimbo). Asi mubvunzo wamambo muenzaniso wakaipa, nokuti Torah inotaura nezvawo zvakajeka. Ndiri kutaura nezvemibvunzo isina kujeka halakhic uye ideological. Kumwero mumwechetewo unogona kundiunzawo kuti Torah inotsigira kutenda muna Mwari.
Tora nyore, chokwadi ndechekuti haitungamiri kune shanduko mukuona.
2. Ichokwadi chokuti chimwe chinhu hachina tsanangudzo hazvirevi kuti hapana chikonzero chekutaura pamusoro pacho (uye kwete se positivists). Mashoko aMuharram R. Piersig anozivikanwa mubhuku rake Zen uye Art of Motorcycle Maintenance pamusoro petsanangudzo yepfungwa yehutano, uye pamusoro pekuti (vakaipa) vaGiriki vakagogodza pfungwa dzedu kunze kwekuti zvinhu zvose zvinofanira kutsanangurwa. . Kana iwe uchifunga kuti ndinofunga iwe uchauya kumhedziso yekuti hauzive nzira yekutsanangura iyo pfungwa yekukosha kwetsika zvakare. Hapana pfungwa huru inogona kutsanangurwa. Ndakuunzirai muenzaniso wekukosha kwechitendero: utsvene hweupristi, utsvene hwetemberi nezvimwe zvakadaro.
Wakauya nemuenzaniso weuranda, asi wakazviitira hupenyu huri nyore. Ndiri kutaura nezvakawanda zveTorah neHalacha. Havana kuita basa ravo, asi vakanga vasina kumbova noukoshi hwetsika. Saka ndedzei? Iwe uri kutaura chirevo che theoretical kuti ne mitzvos munhu anogona kuve nehunhu. Handioni chinoratidza izvozvo. Kwete mukuongorora mitzvos uye yakarongwa (vakawanda havana chokuita netsika), kana mukucherechedza kwechokwadi pachako. Naizvozvo mukuona kwangu izvi zvinoshungurudza zvakanyanya uye kwete maonero akapusa echokwadi.
29 Elul 09 - 2016/14/54 naXNUMX:XNUMX
Kusvika pakuziva kwangu, iwe unoona kugadzwa kwehurumende sechiitiko chepanyama (pasina kupindira kwaMwari). Kana zvakadaro, ndeipi iri rumbidzo kuna Mwari inofanira kutaurwa muaya mashoko akapoteredza?
Zvechokwadi, ndinonzwisisa kuti nhasi hakuna kubatanidzwa kwaMwari munhoroondo, kwete chete mukugadzwa kwehurumende (uye kunyange kana iripo handina nzira yekuziva kuti pazvinoitika kupi uye rini). Naizvozvo, kana chimwe chinhu chinofadza chikaitika (= “chishamiso”?) Unongova mukana wokuti rumbidzo sereurura yokusikwa kwenyika nokusikwa kwangu.
29 Elul 09 - 2016/14/55 naXNUMX:XNUMX
Ini handina kukwanisa kunzwisisa mumaonero ako, chii chaizvo musiyano uripo pakati pekuzvipira ku "Dina Damlakhuta Dina" iyo yakasimbiswa uye inoshanda mu halakhah kunyangwe pasi pekutonga kweVemamwe Marudzi mukutapwa, uye mamiriro ezvinhu nhasi, pamwe unoreva kuti zviri pamusoro apa. mutemo waingoshanda kumitemo yepamusoro kune dzimwe nzvimbo uye hunhu hwepasirese nezvimwe zvakadaro?
Mubvunzo wacho handina kuunzwisisa
Ndichanokora mashoko chikamu chekutaura kwenyu: “Sorutivi rwenhau imwe cheteyo, takava vakarovedzana neidi rokuti chinhu chiri chose chakanga chiri Torah uye chinhu chiri chose chakafamba. Kuti hakuna hupenyu hwakajairika hwemunhu, uye zvechokwadi hapana kukosha, kunze kwe halakhah. Kuti zvese zvinofanirwa kufambiswa uye zvinotemwa nevanopikisa uye varabhi. Asi nhasi pane mukana wekudzoka kumuitiro. Vanhu veIsraeri vane chimiro chenyika chenyika muBH (BH kwete pamusoro penyika asi pakudzoka kwechimiro chenyika choupenyu hwedu tose. Vamwe vakanongedzera kwachiri sokudzokera kwedu kunhano yenhau). Hapana chikonzero chekuramba takanamatira kune chimiro chatakajaira nekuda kweakasiyana enhoroondo pathologies. " Uye nekuda kweizvozvo ndinobvunza: mushure mezvose, halakhah kunyangwe panguva iyo "nekuda kwezvivi zvedu takadzingwa kubva munyika yedu," kunyangwe ipapo isu takanga tiri pasi pehumwe hutongi hwaive nesarudzo (idzo dzinobvawo kubva kune arrass kunze kwe halakhah) ini ndaive ne halakhic chokwadi. , sekureva kwayakabatanidzwa muchikamu che "Dina Damlakhuta Dina", saka chii chinonzi Dimension Yakakosha yakawedzerwa kune iyo pfungwa?
Ndinovimba ikozvino ndazvijekesa zvakanyanya.
Ndanzwisisa. Asi kutonga pasi pevamwe vanhu kunotinetsa uye hatidi. Ichokwadi kuti Dina Damlakhuta ane halakhic chokwadi, saka chii? Zvaireva here kuti zvakanaka kugara pasi pemadziro Franz Josef? Mufaro ndewekuti isu tadzokera kuzotonga hupenyu hwedu isu uye kwete kuti ine halakhic chokwadi.
Ndinokutendai zvikuru nekujekesa zvinhu! Unozowana mirairo nesimba rakananga.
29 Elul 09 - 2016/14/58 naXNUMX:XNUMX
Dai kutsanya kwaingova chiitiko chenyika unofunga kuti vangadai vakapona here? Mutambo unoitwa munharaunda yehurumende ungatsiva chaizvoizvo munyengetero unoitwa mumasinagogi ose here?
Holocaust chiitiko chehukuru hwakasimba pane chegumi cheTevet kana Gedharia nekukurumidza. Sekuona kwangu hapana kupokana kuti nzira yakanaka yekuipfuudza kuzvizvarwa zvinotevera izuva rekuchema kwechitendero, rinova semazuva ose zuva rekutsanya. Vangani vaunoziva (vechitendero) vanoziva Mambo Jehu? Uye vangani vanoziva Gedharia mwanakomana waAhikami?
Kuita sei? VaJudha vanorangarira zvakanaka zvinhu zvine chokuita nezvokudya, ringava zororo kana kuti kutsanya. Nhoroondo yakaratidza kuti inoshanda zviri nani. Uye humbowo hwekuti hapana rimwe rezororo renyika rechiJudha rakasara (Megilat Ta'anit) kunze kwemazuva anogamuchirwa muHalacha.
Ichi chirevo chekubatsira. Ini ndinobata nemubvunzo wekuti halakhah inoda here kana kuti inotarisira kuseta zuva rakadaro rekurangarira. Mubvunzo wezvinonyanya kushanda zvakasiyana uye zvinofanira kukurukurwa zvakasiyana.
Nezvemubvunzo wechipiri, maonero angu ndeokuti kana vakakanganwa - vanokanganwa. Pane imwe nguva zviitiko zvinova kure uye zvisina basa (hazviratidzike kwandiri zvakakosha nhasi kuti ndirangarire Gedharia kana Jehu). Matauriro ako akavakirwa pamafungiro akapararira ekuti chinamato uye halakhah zvinofanirwa kupa masevhisi kuhunhu hwenyika uye hwepasirese hwevanhu. Handibvumirani nazvo.
29 Elul 09 - 2016/15/01 naXNUMX:XNUMX
Ndakanzwa nezvako kakawanda kubva pamazuva edzidziso yako muJeruhamu kubva kushamwari dzaRabhi Uriel Eitam.
Ndakaverenga nechido chinyorwa chako pamusoro pekugadzirisa kutsanya kweZuva reHolocaust, ndinobvumirana nehuwandu hwezvinhu.
Ndakanzwa kakawanda kubva kumushakabvu Rabbi Amital: "Hazvisi zvese ipfungwa yeTorah." "Hazvisi zvese zvinoda kutaurwa nezveDa'at Torah" nezvimwe
Farai mumashoko enyu maererano nerumbidzo paZuva reKuzvitonga.
Zvinoita sei kuti tirumbidze chishamiso chakaitika woti hachina revo yechitendero? Kana kuti handina kunzwisisa zvawaitaura.
Funga nezve chirevo chakagadzira (kusiyanisa) mushure mekuenda kuchimbuzi. Kureurura kuna Mwari kuti akavhura maburi angu kune chikamu chechitendero here? Chisvusvuro chandinokwazisa ndisati ndapedza uye kana chapedza chine chitendero here? Kwandiri nyika yakaita sezvimbuzi kana kudya kwemangwanani.
Kana kuri kurumbidza chishamiso, ndiwo mumwe mubvunzo. Maonero angu ndeekuti hakuna zvishamiso nhasi (kana kuti hapana chinoratidza kuti zviripo), uye hapana kubatanidzwa kwaMwari munyika zvachose. Apo zvinoitika zvinofadza zvinoitika kwatiri, zvakadai sokugadzwa kwehurumende, chinonyandura kutenda Mwari nokuda kwokusikwa kwenyika nechisiko chedu timene. Asi ini ndichawedzera pane izvo muGaza (?) Mubhuku randiri kunyora iye zvino nezve theology yemazuva ano.
Asi tine chiremera chokururamisa zvikomborero pachedu nokuda kweZuva roRusununguko here?
Izvi zvinofanira kukurukurwa. Zvimwe kune dzimwe nzira (Meiri) zvinotenderwa kutaura rumbidzo muchishamiso chega chega cheruponeso nekureurura, uye zvino zvinoita sokuti munhu anofanira kukomborera kunyange pasina mutemo unokosha. Sechikomborero pakudya apuro pese patinodya uye tisingafaniri kugadzirisa maropafadzo paapuro rega rega.
Chero zvazvingava, hapana muganhu wokurumbidza pasina chikomborero.
Uye kune nzvimbo huru yeSabra yekuti kunyangwe neropafadzo haina muganhu. Kana Israeri mushure mechishamiso cheChanukah vaizoti Hallel mukuropafadza kubva kwavari pasina kudzorwa kwevachenjeri, uye kuti paive nedambudziko nazvo? Vamwe vokutanga vanokomborerwawo netsika, uye munhau iyi mune kurukurirano yechikomborero chokurumbidza icho chimene. Asi mune izvozvo ndinozeza, zvichingodaro.
Zvakandiomera kuona Nyika yeIsrael se "sevhisi."
Vanhu veIsirairi vakadzokera kuIsraeri mushure memakore 2000. Zvakaipa kuti nyika haina kugadzwa makore makumi maviri apfuura….
Kutenda kuhurumende kune boka remakadhidhi. Hurumende yakazvimirira yakadzokera kuvanhu veIsraeri. Matauriro ari muVachenjeri anonzi "mazuva aMesiasi."
Kurumbidza hakusi kwechishamiso chete asi kweruponeso
Chishamiso hakusi kungotyora mitemo yezvakasikwa asi kutyora mitemo yenhoroondo kana kuti pfungwa.
Ndekupi kumwe kwatakanongedza nyaya iyo vanhu vakapararira kumagumo enyika vachidzokera kunyika yavo mushure memakore 2000?
Zvinomugadzirisa. Developer. Boka remakadhidhi rakagadzirwa mairi. Ndeupi mumwe muenzaniso uripo?
Ko vaprofita havangatarisiri izvi muchiratidzo chavo here?
Pashure pezvose, kana makore 80 apfuura vangadai akaudza Mordhekai kubva Morocco uye Libhish kubva Poland kuti vari. Vanakomana vavo navazukuru vavo vachava pamwe chete muNyika yaIsraeri mukutonga kwavaIsraeri uye vachagadzira mhuri pamwe chete. Vagoti chimbuzi here?
Pandakafananidza Hurumende yeIsrael nemasevhisi, handina kureva kuti nyika haina maturo kana kuti inosemesa semasevhisi. Ndaireva kutaura kuti nyika i (yakakosha) zvinoreva kwatiri, uye hapana chimwe. Ndinofara zvikuru kuti nzira iyi tinayo, uye zvechokwadi makore mazhinji handisati ndave, uye zvakadaro handizvioni seukoshi hwechitendero. Inonyanya kukosha yenyika. Zvirokwazvo kuuya kwaMesia chivimbiso chakafanana nokunaya kwemvura. Mazuva aMesia haanawo kukosha kwechitendero sezvo pasina kuchengetwa kwe mitzvos, asi kazhinji nzira inozotibvumira kuchengeta mimwe mitzvos (Temberi, nezvimwewo). Kuva mupfumi inzirawo yokuchengeta mirairo, uye hakuiti kuti upfumi hunokosha hwechitendero. Nyika inonyanya nzira, uye chokwadi chekuti yave ichishaikwa kwatiri kwenguva yakareba uye isu taida uye takatambura pasina iyo inonyanya kuvhiringidza kwatiri (semurombo anoona mari seyakakosha nekuda kwekutambudzika kwake).
Kana ari mashura pane nyonganiso ine mari yakawanda. Kupindira kwose kwaMwari munyika chishamiso. Kupindira kunoreva kuti chimwe chinhu chaifanira kuitika pasina kupindira (maererano nemitemo yezvakasikwa) uye Mwari akapindira uye chimwe chinhu chakaitika. Izvi zvinoreva kutyorwa kwemitemo yechisikigo. Ndiko kuti, chishamiso. Hakuna kupindira kwaMwari muzvisikwa izvo zvisiri chishamiso.
Kusiyana kwekudzoka kwedu kuIsrael kunozivikanwa kwandiri uye ndinobvumirana nazvo. Zvinoreva here kuti paita chishamiso apa? Kupokana kukuru mumaziso angu. Ichi chiitiko chekare chisina kujairika.
Handina kunzwisisa musiyano. Mwari akati achatuma muprofita kana kuti kuchanaya. We did mitzvot, uchafunga kusanaya rinhi? Mushure mevhiki? mwedzi? chizvarwa? Uchasarudza sei kuita mitzvot kana kuti kwete? Mirairo mingani inofanira kuitwa? Vamwe vanhu? Zvose pano hazvisi zvechokwadi kuramba. Iri inyaya yemafungiro ese uye kwete yekuramba. Sezvandakanyora, mhedziso yangu yekuti Mwari haapindire haisi mhedzisiro yekuramba kusingaite asi yekufungidzira.
Ini zvino ndinonzwisisa zvaunoreva ne "chinamato" uye nekudaro ndinonzwisisa mazwi eHurumende yeIsrael uye nekugadzwa kwayo hakuna chirevo chechitendero, ndinoona izwi rekuti "chinamato" riine chirevo chakafara uye nekudaro mumaziso eKibbutz Galuyot nezvimwe. ine chirevo chikuru chechitendero.
Zvimwe chetezvo zvinoenda kumazuva aMesia, uye handipindi pano munyaya yekuti zviri pachena kuti kuchava netemberi yekuuya kwaMesia, hazvisi nyore.
Kana zviri zvezvishamiso, ndinogovera pfungwa yokuti "mangwana zuva richabuda" - ichi hachisi chishamiso. Kuzadzikiswa kwemitemo yezvakasikwa hachisi chishamiso.
Ini ndinogovera zvachose chinzvimbo chekuti zvese hazvisi chishamiso, sekutaura kunoita vamwe vanhu.
Asi kuronga nhapwa nekudzoka kuIsraeri mushure mezviuru zviviri zvemakore, chiitiko chisingaenzaniswi pakati pemamwe marudzi, hachisi chiitiko chemusikirwo.
Ichokwadi kuti hapana kuyambuka gungwa kana "zuva muGivon Dom" pano, asi pane chiitiko pano chisiri chechisikigo, chakasiyana mumhando uye rudzi. Sezviri pachena kunyange panyaya iyi hatibvumirani.
Nharo mbiri dzinoda kupatsanurwa: 1. Kugadzwa kwehurumende uye kuunganidzwa kwevakatapwa chaive chishamiso. 2. Zviviri izvi zvine chirevo chechitendero. Hapana kutsamira pamativi ese. Panogona kuva nechishamiso chisina kukosha kwechitendero (sekuvhura maburi kune avo vanofunga kuti chishamiso), uye zvechokwadi panogona kuva nechirevo chechitendero uye hachisi chishamiso. Ndinopikisa kuti hapana chinoratidza kuti ichi chishamiso (anomalies haisi chishamiso), uyewo kuti hapana kukosha kwechitendero (Ini ndiri Zionist yenyika). Sezvakataurwa, zvinokwanisika kusabvumirana pane chimwe chezvirevo zviviri izvi zvakasiyana kana pazvose pamwechete.
Uyezve, zvinogoneka kuti nyika ino ichava kukura kwerudzikinuro rwedu (inshallah), uye temberi ichavakwa mairi uye rudzikinuro ruchauya kuburikidza nayo. Uye zvakadaro haina kukosha kwechitendero mumaziso angu. Ipuratifomu yenyika yakagadzirirwa zvinangwa zvenyika uye zvinokurudzira zvenyika. Zviito zvakadaro hazvina maturo echitendero.
Ndiko kuti, chirevo chechitendero, mumaonero ako, chinoda chinangwa chechitendero?
Chiito chevanhu chine kukosha kwechitendero chete kana chichiitwa nechinangwa chechitendero (A.A. Leibowitz). Kunyangwe mitzvos isingade chinangwa asi ingori mumitzvos (nekuda kweiyo sabra yemamiriro sezita risina kurongeka). Uye kunyanya kuti ndakaratidza muchinyorwa (masikati, kukundikana kwenyika mukudarika) kuti mirangariro yese yemirairo inoda kutenda. Kuomesa machakwi kusingaitwe nekuda kwedenga uye nekuda kwe mitzvah (kugara kwaIsraeri) hakuna kukosha mune zvechitendero. Hune kukosha kwenyika.
Izvi zvamazvirokwazvo mugariro unodiwa bedzi asi hauna kukwana. Chiito chacho pachacho chinofanira kunge chine kukosha kwechitendero, uye Torah chete ndiyo inotsanangura. Munhu anomira netsoka imwe chete nokuda kwechikonzero chechitendero chakaora mwoyo haana kukosha kwechitendero kwazviri.
Maimonides muMo'an muPentateuch anosiyanisa munhu anoita "mumakumbo nemakumbo" nemunhu anoita nechinangwa uye chinangwa.
Zviri pachena kuti chepamusoro chii.
Mubvunzo ndewekuti tichatsanangura sekusanamata chero chiito chinoitwa nemunhu asina chinangwa? Ini ndinobvuma semusimboti asi ichi chidzidzo chekumanikidzirwa kune vazhinji kubva kuIsrael, kuchine zvimwe zvinofambisa uye kukosha kwebasa "kwete nekuda kwaro"...
Muchinyorwa changu pamusoro peRazor yaOakham ndakatsanangura kuti kusaita kunze kwekutenda hakusi kuita kwete nekuda kwayo. Haisi tsika yechitendero zvachose. Ona Rambam Sufach kubva kuMadzimambo. Uyo anotenda uye asingaiti nemaune, pano munhu anofanira kupatsanura pakati pemitzvos neisingatsanangurwi semitzvah. Kudzidza zvakarurama chinhu chakanaka, asi hachisi chishandiso chokujekesa chokwadi. Uye akaona muvatsinhiri (Rambam naRabbeinu Yonah navamwe) pamusoro peMishnah muAvot (Hoy Dan munhu wose ari kurudyi) kuti vakanyora inokurukura pano bedzi kuti ine mufungo, inopesana nemirangariro yakakurumbira. Uye ndakanyora nezvazvo muzvinyorwa zvangu zveBDD paOakham's razor.
Kana murabhi achigona kutsanangura zvaanoreva nekutaura "kukosha kwechitendero." Kureva kuti, kukosha kwechitendero chete kuchengetwa kwemitzvah pachayo (tsanangudzo inoregererwa naRabhi nekuti ndinonzwisisa kuti haazvifarire, Leibowitzian), ndicho chinhu chinobatsira kuchengetwa kwemitzvah yakaitwa kunze kwechitendero. kuziva, uye kupfuura izvozvo: Kukosha kwechitendero kana kwete.
Ndatenda, uye ndine urombo kana ndikadzosa rabhi kunhaurirano dzekare uye dzakakanganwa kubva pamoyo.
Rugare rukuru.Kukosha kwechitendero zvinoreva kukosha mubasa raMwari. Kukosha kwechitendero hausi murairo chete sezvo kunamata Mwari kwakakura kupfuura mutemo. Kunyangwe pamberi peShulchan Aruch, ine kukosha kwechitendero. Chokwadi, mamiriro ezvinhu anodiwawo kuti aitwe nokuda kwebasa raMwari.
Kusvikira pakutonga kwangu nyika haina kukosha kwechitendero mune chero pfungwa. Iyo nyika ndeyangu / yedu yatinoda uye kwete kukosha. Ini ndinoda kugara pakati pevanhu vangu uye muNyika yeIsrael inova nhoroondo yedu yekupindwa muropa. ndizvo.
Kana iri nyika inotongwa ne halakhah munhu anofanirwa kukurukura kuti ine kukosha kwakadii (sezvo nyika isiri mudziyo wevagari vemo), asi nyika yakaita seyedu haina kukosha kwechitendero.
Kana iri NFM handizive kuti ndeipi NFM yamuri kutsvaga (kunze kwekutsveneswa kwemukadzi). Izvi zvinhu zviviri zvakasiyana zvachose: chinhu chinodiwa uye chakakosha. Zvakadini kana chimwe chinhu chakanaka kana chakanaka? Izvi zvingori zvinhu zviviri zvakasiyana.
Ndanga ndichida kuti, chii chinorehwa nekukosha kwechitendero kupfuura tsananguro yawakaisa? Chii chinofanirwa kuve musiyano pakati pemitzvah, kana kukosha kwechitendero, uye chii chinondibatsira mukuvapo kwayo? Kana kuti handina kunzwisisa mashoko arabhi uye uyuwo mubvunzo usingabereki, sezvo pfungwa iyi isina zvayaireva kupfuura tsananguro yayo? Ndinofunga kuti zvinokwanisika kutsanangura musiyano pakati pezvakanaka uye zvakanaka, kunyange kana zvisiri mumashoko, uye NPM pakati pavo. (E.g.: Handifungi kuti ndichawana mumwe munhu achapa hupenyu hwake nokuda kwerunako, asi nokuda kwezvakanaka hongu, nekuda kwekuti runako haruna chirevo chakakosha zvakakwana, kunyanya mumaonero angu).
post Scriptum. Iwe unoona nyika (sezvandinoinzwisisa) sechimwe chinhu chakakosha nyika, uye kwete sekubatsira kunyangwe kuchengeta mitzvos. (Kunyange zvazvo uchitaura kuti chinobetsera kuchengeta mirairo hachisati chichitongorangarirwa soukoshi hworudzidziso.) Mukuwirirana nomutoo wako, nei chaizvoizvo uchitaura kuti Hillel? Chinhu chinokonzeresa kureurura pamusoro pekusikwa kwenyika chingave kunyangwe ndikawana mubhadharo kana rimwe bhuku reHarry Potter rakabuda, asi hapana munhuwo zvake angati rumbidzo. Kana hurumende ichingova noukoshi hwenyika bedzi, uye isina kutanga mugadziriro yokunamatwa kwaMwari, ipapo ini panzvimbo yako handingazvioni sokunyandura kwakanaka kurumbidza. Rabhi achakwanisa kutsanangura zvaanofunga uye muganhu unoyambuka kupi?
Ndinokutendai, ndine urombo uye kufara kwegore idzva.
Zvakaoma kuti ndiite hurukuro panguva dzakadai.
Hapana chinhu chine kukosha kwechitendero chinouya kunguva yemitzvah. Mukupesana, mitzvah muenzaniso wechimwe chinhu choukoshi hworudzidziso. Asi kunyange mukuita kwetsika kune kukosha uye kukosha kwechitendero (mhou nokuti ndiyo kuzadzikiswa kwekuda kwaMwari). Mukupesana, kuita chinodikanwa chokusaziva hakuna ukoshi hwetsika kana kuti hworudzidziso. Munhu anoda nyika nenzira yaanoda kudya kwemangwanani kana imba. Kuzadzikiswa kwechinodiwa kwete kukosha. Kana chinhu chakakosha muhupenyu hwako chazadzikiswa (sekuponesa hupenyu hwako) ichi chikonzero chikuru chekutaura rumbidzo. Ini handisi kuona zvisinganzwisisike pano uye zvinoda kutsanangurwa.
Nyika inobvumira tsika dzechitendero kucherechedzwa here? pamwe hongu. Asi kudya kwemangwanani uye muhoro zvinobvumirawo.
29 Elul 09 - 2016/15/03 naXNUMX:XNUMX
Kutevera kubva munhaurirano dziri pamusoro ndinoda kubvunza yakati wandei mibvunzo yandinobvunzwa mumaonero angu zvese kubva kuchinyorwa uye kubva muhurukuro dzakatenderedza izvi.
A. Sezvandinonzwisisa, Hukuru Hwake haatendi mukutarisira mupfungwa yekupindira kweMusiki uye kusikwa kwe "zvishamiso" zvakadai seHurumende yeIsrael, kuunganidza nhapwa, nezvimwewo, kunyanya kubva "zvishamiso" zviduku "zvinoitika" kumunhu se "mari" yakadonha kubva panzvimbo isingatarisirwi.
Ndakabvunza, [maererano nemusoro waunowanzo kupa zvakawanda], maererano nemhindumupindu wakanyora kuti vanhu vasingadaviri kuvapo kwaMwari vanotarisa mhindumupindu mukati memitemo iwe uchimira parutivi wotarisa kunze kwemitemo wobvunza kuti 'ndiani akasika mitemo iyi', uye paunoona mutemo iwoyo. inovakwa nenzira iyi inotungamirira kuzvisikwa, unogumisa Kuti Mwari akasika mutemo nenzira iyi, ndiko kuti, kuti Mwari akasika 'mutemo wekushanduka-shanduka'. Kana zvakadaro, kunyangwe maererano nezvishamiso, ichokwadi kuti mukuona kwe'pamusoro-soro' uye kwakapfava kunoratidzika kwatiri kuti zvinhu zvese ndezvemuzvarirwo, uye mafambiro evanhu veIsraeri kwezvizvarwa ane tsananguro dzechisikigo, sekugadzwa kwe State of Israel, asi kana tikatarisa kunze tobvunza Zvakafanana nezvakaporofitwa nevaporofita neTorah, pamwe tinogona kutaura kuti Musiki akaronga uye akatungamira iyi yese 'yechisikigo' hurongwa nechinangwa, uye kutarisa kunze kwemaitiro uye mitemo yechisikigo. mukati maro, anogona kupa mufananidzo wekupa? [Kunyangwe mashura madiki maonero aya anogona kutorwa].
B. Mumwe mubvunzo, zvinoreva here kuti hamutendi zvishamiso zvakanyorwa muTorah neMuporofita, uye vanoonekwa nekutarisa kwepamusoro sekuramba mitemo yefizikisi yakadai sekuti: tsvimbo inova nyoka, chingwa chinoburuka kubva kudenga. , mvura inoshanduka kuva ropa, ngoro namabhiza anokwira kudenga, dutu remhepo, Muunganidzwa wengano?
chetatu. Mukuwedzera, izvi zvinorevei pamusoro pekutenda kwako mukuziva Mwari pamusoro pezviito zvevanhu, nepamusoro-soro zvinoratidzika kuti kushayikwa kwekutarisa hakuregi kuziva Mwari, asi zvinoratidzika kuti zvakadzama pane zvinorehwa nekutenda uku kune mumwe nemumwe, nezvimwewo. pfungwa ye 'mubayiro uye kurangwa' yenzira yako haipo, uye saka mazwi ako anoreva kuti 'nyika inotevera' ichitendero cheuchenjeri chisina tsigiro muTorah [Ndinobvumirana nazvo, asi vaporofita nemagwaro ane zvakawanda. tsigiro yakajeka], kusatenda musimboti uyu, kudzokorora mazwi aLeibowitz, Kuti 'mutero' wese kumitzvah ndeyekuti nekuda kwekuti ndakatora kuita kudaro, zvinoreva here iwe? Kana zvakadaro ndinovimba kwakajeka kwauri kuti havasi vazhinji vachazengurira kupinda chitendero ichi, nei ndichizviisa ndimene muhurongwa hwechinyakare uye hwechinyakare hwemitemo [iwe unobvumawo kuti mirairo mizhinji uye mitzvos inobvisa kuravira kwavo kwemazera nemazera] nei usingadaro ' gamuchira' chikamu chete chegadziriro iyoyo yemitemo, iwe chete Wakakodzera, chii chakaipa nemitemo yeNyika yeIsrael?Kuremedzerei iyo iripo zvakanyanya?
D. Zvinonzwika kubva pane zvawataura kuti unotenda muchirevo che'Torah inobva kudenga' [mukati meimwe muganhu sezvo ndakanzwisisa kuti unobvuma zvimwe zvezvinotaurwa nevatsoropodzi veBhaibheri], uye kana zvisina kudaro unofanira kutenda mupfungwa ye. 'chiporofita'. Uye ndakabvunza, nei pano zvakare musingashandisi pfungwa imwe chete [zvine musorowo mumaonero angu kutaura], kuti chose chandisingaoni handina chikonzero chokufunga kuti chiriko, kureva kwemakore anoda kusvika 2500 hapana akamboona. uporofita kuti chii uye kuti hunofanira kuratidza sei, uye unotenda Kubva pauporofita husina kukomba hwakambovapo [uporofita hwekare hwakafanana neiyi nzira: ita zvakanaka iva wakanaka, ita zvakaipa iva zvakaipa, miitiro yose yakauya gare gare inoita. kwete kutsauka kubva munzira yechisikigo], saka wadii kungofunga kuti hakuna chinhu chakadai sechiporofita uye kufungidzira Kwevanhu vekare uye sezvo isipo nhasi yakanga isipo kare, uye sezvatakaita isu. Kamwe kufungidzira kune mweya nemadhimoni uye zvitsinga uye zodiac zviratidzo uye dzimwe ngano dzakanaka, fungidzira pane chiporofita, chaizvo ini ndinotaura zvaunotaura pamashoko ako, handina chikonzero chekutenda muchiporofita kana a. Handisi kuiona iripo nhasi. B. Ndinogona kutsanangura zviporofita zvese nemasikirwo. chetatu. Ndine chikonzero chine musoro chekutenda kuti pane imwe nguva vanhu vaive vasina misiyano yakanaka uye vakagadzira kuti vakaporofita kana kuzvifungidzira.
A. Chekutanga, handizive izvo kukudzwa kwangu kunotendwa kana kusatenda, ndiri padyo nezvandinotenda (kana kusatenda). Kana zviri izvo zvandinotenda, chokwadi handina chinoratidza kuti pane mashura ari kuitika munyika yedu. Pamwe variko asi handisi kuvaona. Izvi hazvina kufanana nemakakatanwa angu pamusoro pemhindumupindu sezvo paine gakava rinomanikidza kuvapo kweruoko rwakanangwa (musiki), nepo pano ichingoitika.
Kupfuura izvozvo, chishamiso chinorondedzerwa sokupindira kwaMwari munyika, ndiko kuti, kuchinja kubva munzira yayo yenguva dzose. Hoy anoti kufamba maererano nemirairo kwaifanirwa kuve X uye Mwari vakashandura kuita Y. Chero bedzi ndine tsananguro yemusikirwo yezviri kuitika, handioni chikonzero chekufunga kuti pane kupindira. Uye kana ari mumwe munhu anogadzira maitiro echisikigo, saka ndiri kutaura nezvazvo. Uku ndiko kusikwa kwemitemo.
B. Mumabhuku angu ini ndichatsanangura rondedzero yangu kune mashura etsanangudzo munzvimbo dzakasiyana siyana. Muzhinji, zvinogoneka kuti munguva yakapfuura Mwari akapindira zvakanyanya (zvino pakanga paine zvishamiso uye kwaive nehuporofita). Nhasi handisi kuona chero zviratidzo zvekubatanidzwa kwaMwari zvakadaro.
chetatu. Handina kunzwisisa apa. Zvakadiniko nokushaikwa kwokubatanidzwa mukushaikwa kwokutarisira? Iko kune kungotarisisa kwezviito zvevanhu asi hapana kupindira (kamwe kwete kazhinji).
Kuzvipira kuTorah nemitzvah hakurevi mubairo uye kurangwa asi mubasa rekuita zvinorairwa naMwari. Maimonides akatonyora mutsinhiro yake pamusoro pekariro dzavashandi dzetuso nokutya chirango. Zvichida ndosaka izvi zvitendero zveUAV zvakagadzirwa. Uye pamwe ndezvechokwadi, asi ini handizivi.
Mubvunzo wezviyero, ndiani achabatana uye ndiani asingazopindi, hauna basa nenyaya yechokwadi. Mubvunzo ndewekuti ndiri right here kwete kuti ndichave nemukurumbira here. Ini ndinopikisa nhema tsvene (kutaura nhema kuti ubatanidze vanhu vazhinji kubasa raMwari). Dai bedzi nemhaka yomufananidzo wenzou yaMaimonides. Avo vanopinda mubasa vanozviita nokuda kwokukanganisa, saka vari kushandira Mwari asina kururama, uye kubatana kwavo hakukoshi.
Chii chinobatana nemitemo yeNyika yeIsrael? Uye kuti uyo anodzichengeta anobuda kunze kwebasa rake rechitendero? Sei usina kutaura nezvemitemo yeFIFA (Football Association)?
D. Izviwo zvichatsanangurwa mubhuku rangu. Zvimwe zveizvi zvinokurukurwawo mumabhuku echokwadi uye asina kugadzikana (pakupokana kweuchapupu kwezuva). Pano ndichatsanangura muchidimbu. Kunyange zvazvo mitemo yezvakasikwa ichiitwa nenzira imwechete nguva dzose, asi vanhu vanoshanduka. Uye izvo zvavaimbofunga kufunga nhasi? Uye vakamboita sei nhasi? Vakambopfekei nhasi? Saka nei uchifunga kuti maitiro aMwari haachinji? Dai ndaifanira kusarudza ndaizoda kuzvifananidza nevanhu kwete nezvisikwa zvisina hupenyu. Hapana chikonzero chekufungidzira kuti achaita zvakafanana nguva dzose. Saka kana afunga kutiza zvishoma nezvishoma kubva panyika, ini handizvioni sechinhu chinoshamisa kana chisinganzwisisike. Mukupesana, ini ndinotova nefungidziro yekuti sei izvi zviri kuitika. Semwana wekuti kana achinge akura baba vake vanomusiya achiwedzera ega omhanya akazvimirira. Ndizvo zvakaitawo mafungiro aMwari kwatiri. Kuenda kwake hakusi kuderera kwezvizvarwa sezvatinoziva, asi kusimuka (kukura) kwezvizvarwa. Nhasi tinogona kutonzwisisa kuti kune mutungamiri weguta guru kunyange pasina minana. Tine unyanzvi hwouzivi hwokunzwisisa kuti nyika inodzorwa nemitemo isingachinji inopupurira zvikuru Musiki kupfuura nyika isingachinjiki. Saka zvino auchada minana. Zvimwe dai taizvibata uye tichifunga sevanhu vakuru, sezvaitarisirwa kwatiri. Zvechokwadi kune vamwe vane pfungwa dzehucheche, asi kubva kwavari zvichida vanotarisirwa kukura.
Kutevera mhinduro iyi, iwe wakataura kuti "zvirokwazvo zvinogoneka kuti munguva yakapfuura Mwari akapindira zvakanyanya." Asi kune mavhesi ari muTorah anotaura nezve kupindira kwezvizvarwa (uye ndakapa mvura kunyika yenyu nenguva yakafanira, uye ndakapa mvura yenyu nenguva yakafanira, nezvimwewo). Zvinogona sei kutaurwa kuti Mwari (uyo sezviri pachena aiziva kuti aizogura batano pane imwe nguva) akanyora zvipikirwa ku“mubairo” uyo pane imwe nguva waaida kurega kuzadzisa? Pashure pezvose, kana mubereki akavimbisa mwana wake zviwitsi mukutsinhana nomufambiro wakanaka, kunyange kana mwana wacho akakura, mubereki anotarisirwa kuchengeta vimbiso yake, handiti? Uye kana achida kurega kuita zvepabonde, zvishoma anofanira kutsanangura chikonzero nei (takakura, nezvimwewo).
MuTorah mune zvakare nezvevaporofita, zviporofita nezvishamiso, uye ivo vakanyangarika. Temberi nezvibayiro zvakanyangarikawo. Ndizvo zvakaita uranda uye huchiwedzera. Takaona kuti dzimwe nguva Torah inotaura kuvanhu venguva yekupa Tora, uye pane shanduko iyo Torah isingataure. Munhu anogona kufungidzira kuti sei, asi izvi ndizvo zvazviri.
Kana dziri maporofita, zviporofita, minana, temberi, zvibairo, huranda, nezvimwe, izvi zvinhu zvisina vimbiso inomira nezvizvarwa. Pane mienzaniso chete yekuti zvakaitika pane imwe nguva, asi nei isu taizotarisira kuti zvichave zvakadaro mune ramangwana? Asi maererano nemubairo uye chirango, Mwari akanyora zvakajeka muTorah kuti kune kubatana kwezvizvarwa pakati pekuchengetwa kwemitzvos nemumwe mubairo, saka ndine chikonzero chakanaka chekutarisira kuti kubatana uku kuchavapo mune ramangwana, uye kana tikagumisa kuti zvinoita. haipo mubvunzo wakasimba wechokwadi cheTorah, kwete? Tsanangudzo chete yandinogona kufunga nezvemubvunzo uyu zvirevo zvakaita sekuti: "Mubayiro wemitzvah pachitsuwa cheAlma Likha" uye ipapo tichafanira kudzura zviri nyore kubva mundima dzakadai sekuti "Uye ndakapa mvura yenyu nenguva yakafanira" uye toseta. ivo somufananidzo wemihoro munyika inotevera. Asi zvakadaro zvakaoma, nekuti hakuna Bhaibheri rakanyanya kupusa.
Handina kunzwisisa. Nyaya youprofita inosanganisira mirayiro yakawanda. Ko mitzvos haifaniri kuva yezvizvarwa here? Chikamu chebasa raMwari kuteerera kuMuporofita nehutungamiriri hwake hwepamweya kwatiri. Iyi haisi imwe nyaya yataive nemuporofita. Izvi ndizvo zvakavimbiswa naTorah uye akatomuraira kuti aedze kunzwa izwi rake. Muporofita ndiye zvakare chikamu chemaitiro ekuenda kuhondo.
Zvivimbiso zvekuti kana tikachengeta mirairo tichapihwa mvura, zvinodudzirwa nazvo sezvivimbiso zvinobata nenguva iyo mvura inonaya kuna Mwari. Kana zvichibva paari ipapo zvichapihwa kutevedzera kucherechedzwa. Iye zvino afunga kutipa nekuti isu takura, uye zviri pachena kuti kubva zvino zvichienda mberi hazvina basa. Anongotsanangura kwatiri mutemo wake: kana ini ndapa chimwe chinhu ndeyekuchengeta mirairo.
Kana ari muporofita, zvakanyorwa mubhuku raDhuteronomio kuti: “Nokuti muporofita achamuka pakati penyu”, hapana chivimbiso chokudzorerwa pano. Ndiko kuti, mirairo yese ine chekuita nekuongororwa kwemuporofita mirairo iripo - kana muporofita achizogadzwa, ngazvive zvakadaro. Sezvakangoita kana ukapfeka nguo ine mapapiro mana, unofanira kuisa mupendero pairi. Iyo mitzvah haimbomira, asi haizogara ichigoneka. Asi chakasiyana nemavhesi anotaura nezvemubayiro uye chirango ndechekuti ane sungano yekuti kana tikaita A. - ipapo Mwari achaita B. Ukama pachahwo hauna chirevo pane chero mamiriro ezvinhu. Zvinoita sekuti kubatana kunogara kuripo. Kana tasvika pakugumisa kuti kubatana uku hakuna, zvinoita sekunge paine kupokana kuTorah pano. Iwe unogona kukakavara kuti hazvisi zvese zvirevo zviripo muTorah ndezvechokwadi kuzvizvarwa. Asi ipapo anomanikidzwa kutaura kuti mirairo pachayo inogona kuchinjawo.
Wadii kungotaura kuti nepo kubatana uku kusingaonekwe muchokwadi, asi kuripo nenzira yakavanzika (vanza chiso)?
Wauya nemavhesi anotaura nezvemuprofita wenhema. Pamusoro pazvo, mavhesi anobata nemuporofita (Deuteronomio):
Mutauriri Mkrbc Mahic Cmni Ikim kwauri Ikok Mwari wako mwarikadzi Tsmaon: Ccl Asr Salt Mam Ikok Mwari wako Bhrb uchibva paHkhl, uchiti kwete Asf Lsma At Cole Ikok Alhi uye At brigade Hgdlh Hzat kwete Arah Mumwezve, uye La Amot: ndokuti Ikok mwarikadzi Hitibo Asr Dbro: mutauriri Akim Lhm Mkrb Ahihm Uye Pamwe Neuvena: Uye iyo General Islander, Mwari havangave nehanya wheragram: " The Shavua Jacka Island
Nenzira, tsananguro chaiyo haisi iripo mitzvah asi ine conditional positive mitzvah (semuchekechera). Anenge ese positive mitzvah ane zvimiso. An existential mitzvah imitzvah isingagone kubviswa asi inochengetwa chete. Iyi mitzvot inogona kubviswa (kana mamiriro ezvinhu aripo - pfeka nguo nemapapiro, uye usaite mitzvah).
Kana uri mubvunzo wekupedzisira, zvinogona kunzi Mwari vanogara vachipindira asi kana tikaongorora anomhanyira mugomba kuti ativhiringe. Izvozvo zvinoita sezvisingabviri kwandiri. Pese pandinotarisa zvirikuitika munyika zvinhu zvine mutsindo netsanangurowo zvayo. Mitemo yezvakasikwa inoshanda, uye paunoiedza murabhoritari, zvinoitika zvinotarisirwa kuti zviitike. Hapana chikonzero chekufungidzira kuti kune mutambo unoshamisa wekuvanda-uye-kutsvaga pano. Uhwu hausi humbowo asi kufunga kwepfungwa. Pandinoona muviri unofamba, fungidziro yangu ndeyekuti simba rakabata pairi uye kwete kuti Mwari vakasarudza kuifambisa pasina simba. Uyezve, ndinofungidzirawo kuti kune miviri inofamba isina simba. Iyi ndiyo pfungwa yesainzi inogamuchirwa uye inonzwika inonzwisisika uye inoshanda kwandiri.
Kana kuti ndima idzi hadziratidzi kuti muprofita achagadzwa rinhi, kana kuti kangani. Kazhinji, zvirevo zvemhando: Mwari achaita X hazvisi zvikumbiro zvinorambwa (nekuti hapana nguva yakatarwa yekudaro yakatsanangurwa). Asi zvirevo zvemhando: Kana X akaitika saka Mwari achaita kuti Y ari maviri arambike zvichipihwa kuti X inoitika uye Y inogona kuyerwa. Saka pane nzira nhatu dzekugadzirisa gakava rechipiri. Kana kutaura kuti X hazvina kuitika. Kana kutaura kuti Y haiyereki. Kana kuti kutaura kuti chikumbiro charambwa. Asi kana zvikarambwa, hausi mubvunzo wakapfava pamusoro pekururama kwezvinorehwa muTorah zvakazara.
Hapana chinhu pano chinorambwa mupfungwa yesainzi. Mitemo mingani inofanira kuitwa kuti kunaye? Vanhu vangani vanofanira kuita mirairo iyi? Mvura ichanaya yakawanda sei, uye inofanira kunaya kwenguva yakareba sei? Izvi zvinongoramba sezvakaita nyaya yaProphet.
Sezvandakanyora, maonero angu ekuti Mwari haasi kupindira haisi mugumisiro wekuramba kwesayenzi, asi yemafungiro evanhu vose (haaiti seanopindira). Chokwadi chiripo ndechekuti nemamiriro ezvinhu atiri, ndinoti Mwari havapindire uye vatendi vazhinji vanofunga kudaro. Vanofunga kuti pakuita mitzvos mvura inonaya ndofunga hapana kubatana. Meso ako anoona kuti mamiriro echokwadi haaite kusimbiswa kana kuramba chero chinhu pano.
Ini ndinonzwisisa kuti haigone kurambwa nesainzi, asi kunyangwe fungidziro yakangokwana kuti ini ndigone kuramba (kwete mune inonzwisisika-masvomhu pfungwa yezwi).
Musiyano uripo pakati penyaya yeMuporofita nenyaya yekunaya kwemvura ndewekuti kubatana kwemirayiro nemubairo kunofanirwa (mupfungwa huru) kuve nekukasika. Kureva kuti kana vanhu veIzirairi vakaita zvinoenderana nemirairo, mhinduro inobva kuna Mwari inonzwisisika kuti vachasvika mukati menguva inonzwisisika (taura mukati memwedzi mishoma uye kwete mushure memakore 700). Asi panyaya yeMuporofita, hapana chinorambidza kuti Mwari vatumire Muporofita mumwechete mumakore 3000. Iko hakuna "nguva yakafanira yenguva" pano inofungidzirwa.
Chandiri kuedza kunzwisisa ndechekuti unovhara sei kupokana kuri pakati pemaonero ako nemashoko akajeka anobuda mundima. Iwe wakanyora kare mhinduro yakaita seiyi: "Anongotitsanangurira mutemo wake: pandinopa chimwe chinhu ndeyekuchengeta mitzvos." Ndinogona kugamuchira tsananguro iyoyo. Asi kunyange mukuona kwenyu zvinonetsa kutaura mutemo uyu kana akasaushandisa?
Anozviita. Kunyika kana akapa chinhu kunotevera murairo. Mazuvano haapi, kare aipa. Mazuvano haatumi maporofita kare aakatuma. Uyu mutemo wakashanduka (kwete kubatana pakati pekupa nekunamata asi kuzvipa).
Uye kunze kweizvozvo, sezvandakakunyorerai, Fook Hezi kuti mumamiriro ezvinhu ezvino gakava rakaputika pamusoro pekuti anopindira here kana kuti kwete. Saka hapana munhu anogona kutaura kuti chokwadi pachacho chinoratidza kupindira, kwete kunyange nezvikonzero zvekufungidzira uye pfungwa. Saka zvisinei neni munogona kubvunza kuti chinangwa chechirevo ichi ndechei. Pamwe chirevo chakajairwa chisingafanirwe kuongororwa empirically, uye chinoratidza kukosha kwemitzvos. Kukosha kwemitzvos kuchiripo nanhasi. Chokwadi chinoshanduka asi chidzidzo chisingaperi.
29 Elul 09 - 2016/15/04 naXNUMX:XNUMX
Ngatitangei naMister Tsitsro, zvino zvinoreva Derech Eretz Kedma kuTorah hazvisi zvitsva uye kana zvisiri izvo zvinoreva kuti pano pane rudzi rwekumukira chete [ini ndine hunhu kunze kwekuva muranda waGd]
Nokuti chii chinonyanya kukosha kana mitemo iri halakhic kana yezvematongerwo enyika kunze kwekunzwa kuti mitemo yezvematongerwo enyika inobva kune [vanhu] yakajekeswa uye mitemo ye halakhic inongotsamwisa uye inonzwira tsitsi,
Kana ari rabhi wePonivez, chikumbiro ichi halakhic, ndizvo zvakaita kusataura kwake, zviri pachena kuti haana kutaura rumbidzo nekuda kwe halakhah uyewo mupemhi haana kutaura nokuda kwechikonzero chimwe chete mumaonero ake,
Zviri pachena zvakare kuti urikuti Hillel nekuti ndiwo magadzirirwo akaitwa halakhah, sezvo waisazotaura dai zvisiri,
Nezve kuburitswa kwekushaikwa kwekutarisa muIsrael, zvakare nei ichibatsira uye kunaani,
“Munyengetero usingapindurwi,” unofanira kuva pedyo zvikuru nokuswededza vanhu vaIsraeri pedyo naMwari nokumubatanidza noMusiki wake.
Uye izvo, zvakare, unobva kupi?
Ndinochemera kudenha kwakadai, uri murume akachenjera, ndiudze nezvauri kusangana nazvo.
Handipikisane nemafeelings. Munhu wose nemanzwiro avo.
Kunyange kana iwe uchitaura zvose zvakaenda (uye ichi hachisi chokwadi), mubvunzo uchiri izvo mutemo uyu unoratidza. Mafungiro aya akaiswa mariri.
Kubudiswa kwevasina kutarisirwa kunobatsira zvikuru kune avo vanofunga kuti vari kushandirwa uye naizvozvo vanosiya tsika yose. Ndinosangana nevakawanda vavo. Avo vanogashira zvakagamuchirwa zvemukati vacharamba vachizvitarisira pasi mumameseji akajairwa. Manzwiro angu ndeekuti mumwe munhu anoda kugadzirisa kunyange avo vanofunga zvakananga. Iriwo chikamu chakakosha kurehwa. Iko kutaura chaiko kuti chokwadi hachina kukosha asi kungofunga nezvemapenzi emumusha, uye mutemo wezvitsvene manyepo kuti tisashambadze chokwadi, ndizvo zvinoita kuti tirasikirwe nevanakomana vedu vepamusoro uye tigare nevanodya luke idzi. Ichi ndicho chiitiko changu chakapesana. Iwe wakabvunza, saka ndaudza.
Kana zviri zvekunamatira kune zvinyorwa zvekare zvinopesana nechokwadi kubva kune kutya kwakafanana newe, handina chimwe chinhu kunze kwekuunza Gemara paYoma Set AB:
Damar Rabbi Yehoshua ben Levy: Sei zvichinzi nhengo dzeKnesset - dzakadzoreredza korona pakubwinya kwayo kwekutanga. Ipapo Mozisi akati kumunhu mukuru, iye mukuru aityisa, Jeremiya akati, "Vatorwa vanobva Karini mutemberi yake, Aya zvishamiso zvake here? Haana kutaura zvakaipa. Ipapo Dhanyeri akati, Vatorwa vakaitwa varanda pakati pavanakomana vake, ivo magamba ake here? Haana kuti hero. Naye haasi uye vakati: Asi, ugamba hwehugamba hwake hunokunda hunhu hwake, hunopa kureba kune vakaipa. Uye izvi ndizvo zvinomutyisa, kuti pasina kutya Iye Wakaropafadzwa rudzi rumwe rungava pakati pendudzi? Uye Rabbanan Hichi ndiye muranda wangu uye anonyanya kukosha weTeknat Datkin Moshe! Rabhi Elazari akati: Sezvo achiziva muna Iye Wakaropafadzwa kuti ndiye wechokwadi, naizvozvo havana kumurevera nhema.
Ini ndinowanzo kupembedza zvandinoreva uye kusazvitora kubva kwakasiyana zvinyorwa, Leibowitz (wandisingabvumirani naye chero chinhu) kana chero ani zvake. Kana iwe ukawana kufanana pakati pavo naLeibowitz isarudzo yako, asi haina chekuita nehurukuro yacho pachayo. Zvinosiririsa kuti munhu upi noupi anoparidza kuumba mirangariro yenyika maererano nezvinotaurwa navamwe vanopomera vamwe nokuda kwechimiro chakadaro. The disqualifier muna Momo.
Rabhi Michael Shavuot Tov
Ndiko kuti, handifungi kuti kurongeka nemunamato zviri muchikamu chenhema dzinoyera.
Saka ndakubvunza kuti wabva kupi,
Vanobvuma zvachose kuti vanhu vanobvunza kana kuzeza kutaura chokwadi [uye zvakawanda zvakadaro hazvipembedzi kushambadza zvachose uye nezvekutarisa kwakazvimirira uye kunyengetera zvakanyanya nepo ruzhinji rwevatendi vachinzwa kutariswa nemeso uye kutarisirwa vari voga pasi pemunhu wese]
Ini handifungi kuti kutarisisa wega uye munamato chikamu chemibvunzo pamusoro pekutaura chokwadi kana kusavapo kwayo kana zvinhu zvinoda kuzarurirwa,
A] nekuti hapana chikonzero chekutaura kuti zvakadaro,
B] haibatsiri neimwe nzira,
C] Kana Mwari achigona kubatsira munhu asina mhosva uye akasazviita, chaizvoizvo uri kumupomera mhosva yokusamira paropa romuvakidzani [ichokwadi kuti haasi muvakidzani,] nepfungwa.
Iwe unofanirwa kusarudza kana kutaura kwako kune chokwadi chenyaya, kuti zvandiri kutaura ndezvenhema, kana kuti iwe uri kutaura kuti ndinofanira kunyepa "nhema tsvene" kuitira kuti ndisagumbura kutenda kusina mhosva kwevanhu.
Handina chandakapa Mwari mhosva. Aigona kunge akasika nyika yaisazotongwa nemitemo asi akasarudza (uye pamwe akaravira naye) kuzviita maererano nemitemo. Zvisinei, unofunga kuti angadai asina kubatsira pakuurayiwa kweHolocaust here kana kuti mune imwe njodzi? Saka nei asiri kubatsira? Sei uchifunga kuti ndinomupomera kupfuura iwe? Uye kuti ndakavandudza kuti vanhu vanotambura munyika?
Asi zvinhu zvose izvi zvichanyatsotsanangurwa mubhuku rangu.
Chekutanga, handina kumboona zvichemo sezvako zvekuti hapana chekutarisa zvachose.
Uye handifungi kuti inhema dzinoyera, kana zvirizvo saka wadii kusiya zvakadaro,
Kana iri mitemo, gadziriro yemitemo yekusika isina kushanduka kureva kuti hakuna kumbove nekutarisa, kana mitemo ine mazuva?
Kana iri Holocaust, nezvimwewo, kana zvese zviri maererano neaccount saka ini handizive account asi hazvipesane nekutenda kwangu kuri nyore uye hakuna mutoro,
Kana pasina account [supervision] yekudzosera Kushia kuDukhta,
Haftarah pamwe ane kuravira, zvakanaka,,,
2. Ndakatsanangura kuti sei ndisingaisiye.
3. Mitemo yezvakasikwa, iyo apo yakanga isingazikanwi Mwari akazvibvumira kutsauka kubva pairi zvakanyanya, uye mazuvano vanonyanyozivikanwa pamwe haadaro.
4. Pakanga pasina mubvunzo uye hapana kwaaikweva. Kana iwe uchifunga kuti zvese zvinoitika zvine kodzero (kunze kwekunge usinganzwisise), saka chii chauri kundiomesera? Mushure mezvose, kunyange kana, mukuona kwangu, zvinhu zvose zvisingatarisirwi, asi zviri kuitika ndizvo chaizvo zvinofanira kuitika, saka chii chiri dambudziko kuna Mwari, mumaonero angu? Pamusoro pazvo, hapana anotambura kupfuura zvaanofanirwa nazvo.
29 Elul 09 - 2016/15/07 naXNUMX:XNUMX
Mhoro Rabhi Michael
Nokudaro, zvichida zvakanaka kuti izvi ndizvo, dambudziko rinobva muTorah kubva kuvaporofita uye kubva muMagwaro, uye chikonzero chokuti kwaiva nenyaya refu chete muTalmud inopesana nenyaya yacho, dambudziko rekudzidziswa muChazal.
Ndakanyatsotsanangura kuti sei hongu zvisiye,
Mubvunzo ndewokuti, zvinorevei, "zvine zvimwe zvazvinoreva here?"
Yokutanga haina musoro, yechipiri, kana isingaenderane nemubairo uye kurangwa munzira ipi neipi [pane mubairo nechirango here?] Kana pasina nhoroondo [kutarisira] saka zvichida kwete, zvino chii chakasara ..Ndinoedza kufungidzira hypothesis pasina kubudirira,
Capricorn rugare. Ndofunga tapererwa.
29 Elul 09 - 2016/15/08 naXNUMX:XNUMX
Ndiri pano chaipo handina kunzwa kupera simba,
Uye musi waXNUMX ndingafara kune imwe mhinduro kune iyi ndima yandakanyora
Handina chokwadi chekuti ndanzwisisa chikonzero nei zvinhu zviri kutaura pano. Ndinofungidzira kuti inotaura kune chikonzero nei Mwari vakasika nyika kuti itonge nemutemo. Ndinogona kupa zano kumwe kuravira, semuenzaniso kuti anoda kuti isu tigone kuzvitungamira isu munyika. Kana ikasaitwa zviri pamutemo haugone kufanotaura zvichaitika mune chero mamiriro ezvinhu uye hauzokwanisi kurarama.
Zvimwe zvese zvamanyora handizvinzwisise. Asi ndapota kana pasina zvinhu zvitsva chaizvo, tinogumira pano. Yakanga iri tsika yangu kugara ndichipindura email yega yega, asi saiti ino inoda nguva yakawanda kubva kwandiri, uye yakawanda yacho kudzokorora kwezvinhu zvakanyorwa uye zvakataurwa.
29 Elul 09 - 2016/15/09 naXNUMX:XNUMX
Zviripachena pane kuvhiringika pakati pemaemail pano nekuti ini handina kunyatsonzwisisa kuti sei haftarah yatapedza simba ini ndisina kuzvidzokorora kana kamwe chete,
Ndichaisa zvawakanyora zvakare ndopindura, pano,
Rabbi Makal akanyora ,,,
1. Naizvozvo? [Zvakanga zviri maererano neruzivo rwemunhu]
2. Ndakatsanangura kuti sei ndisingamusiye [Maererano nekutarisa]
3. Mitemo yezvakasikwa, iyo kana isingazikanwi Mwari akazvibvumira kutsauka kubva pairi zvakanyanya, uye mazuva ano yava kunyanya kujaira zvimwe haaiti.[Mutsara wandisina kunzwisisa]
1] Naizvozvo pamwe zvakanaka kuti ndizvo zvazviri, dambudziko rinobva muBhaibheri iro rakanyorwa zvinopesana uye kutaura kuti kwaive kweawa imwe chete uye kwenguva dzinopokana nyaya refu muTalmud, dambudziko rekudzidziswa mu. vachenjeri havangamiri mubvunzo,
2] Ndatsanangura uye ndichapfupikisa, handifunge kuti kutarisisa wega uye munamato chikamu chemibvunzo nemhinduro pamusoro pekutaura chokwadi kana kusavapo kwayo kune gumi nemaviri awati unonzwa kuti ari kushandirwa kunyanya kana pasina chikonzero chekudaro. iti ndizvozvo,
4] Iwe wakanyora kuti pamwe Mwari ane poindi musarudzo yake yekusaona uye hazvipesane nemubvunzo wemutoro unoshanda kwaari,
Ndakabvunza, kana kuravira kwayo chiri chinhu chatisingazive, zvine musoro, zvinonzwika zvisina musoro,
Kana kuravira kuri chimwe chinhu chisingazivikanwi asi chinonzwisisika asi chisingaenderane nemubairo uye kurangwa [uye kana pasina kuverenga uye kutarisira saka zvichida kwete] handioni rutivi pano,
Iwe dzokorora iwe pachako.
1. Ndati hazvina basa kwandiri kuti hapana anotaura seni. Sei ndichifanira kupa tsananguro?
2. Uye ndakatsanangura kuti sei hongu zvisiye. Ndakati ndasangana nevanhu vakawanda munamato nekutarisirwa ndizvo chaizvo. Chii chakavandudzwa pano?
3. Kare sainzi yakanga isingazikanwi uye vanhu vaisaziva mitemo yezvakasikwa. Naizvozvo zvakanyanya mukana uye zvakasikwa kutsauka kubva kwavari. Nhasi tinovaziva. Somuenzaniso, vaifunga kuti kwainaya nokuda kwemirayiro. Nhasi tinoziva pachine nguva kuti yakawanda sei mvura yakanaya uye rinhi, uye kuti zvinoenderana nemitemo yemamiriro ekunze uye kwete mitzvos.
4. Handina kunzwisisa pandakanyora kuti Mwari ane chikonzero chokusatarira. Ndakanyora kuti akanga asiri kuona. Kuravira? Pamwe nyaya yekuti isu tatova vana vakuru uye hatifanirwe kupihwa ruoko. Asi zvisinei nedzidziso, mubvunzo wechokwadi ndewekuti anogona kunge achinyatso tarisira? Mukuona kwangu - kwete.
Uye zvakare ndinonyora kuti isu taneta.
Rabhi Makal akanyora
Asi akasarudza (uye zvichida akaravira naye) kuzviita maererano nemitemo.
Pamwe nyaya yekuti isu tatova vana vakuru uye hatifanirwe kupihwa ruoko.
Saka ndiyo mhinduro pasina kumiririra ropa revamwe vana vakuru ???
Kana aya ari iwo maitiro saka taneta chaizvo asi haufungire mumaziso angu ehupombi husina hwaro hwemutemo sezvandambopomerwa pano kakawanda,
Capricorn rugare. Unodzokorora zvakare zvinhu zvakambokurukurwa kusvika pakadzika.
Ndatokutsanangurirai kushaikwa kwemambakwedza muchiti "hamuchamira" icho chakanangana nemiwo.
Ini handizvifarire, asi kwandiri tapedza.
Mhoro Rabhi Michael,
Changamire wavo anoziva kuverenga pakati pemitsetse
Ndakapindura, ndine muhoro nechirango, kuti account inofambiswa sei ini handisi nyanzvi,
Asi usapindire kana uchibuda ropa nekuti wava kufa, ??. ??
Kana wapedza ,,,, saka kwehupenyu ,,
Rabhi haaoni here kudzoka kwevanhu veIsraeri kunyika yake mushure memakore zviuru zviviri zvekutapwa uye pakarepo mushure memakore matatu mushure mekupera kweHolocaust sechisizvo kune zvakasikwa? Izvi hazvifaniri kunzi zvakakonzerwa nekupa kwaMwari here?
Kudzokera kwevanhu veIsraeri kunyika yavo zvirokwazvo chiitiko chisina kujairika pamatanho enhoroondo, asi nhoroondo chinhu chakaoma uye hapana nzira yekuziva kana pakanga paine kupindira kwaMwari pano. Pakazara ndinofunga kuti maitiro aya anogona kunyatsonzwisiswa kunyangwe pasina kukosha kwekubatanidzwa kwayo. Vanhu venyika vanoona maitiro aya uye havaputse zvavanotenda kuti hakuna Mwari-sainzi.
Naizvozvo, kutora mhedziso kubva ku "chishamiso chenhoroondo" chinhu chine njodzi uye chisingatendeseki. Izvi zvimwe zvakasiyana nechishamiso chemuviri.
Nepo pangava nechiremera kuidi rokuti vaporofita vakafanotaura kudzokera kwavanhu kunyika yavo, uye mupfungwa iyi pangava nenzvimbo yokuona iyi muitiro sechiratidzo chokubatanidzwa kwoumwari. Handizive. Ndinongoziva kuti kunyangwe izvi zvisina kuitika hapana angadai akaziva Bhaibheri rake nemusoro (zvikuru vangadai vakada mavhesi akakodzera voabvisa mukupfava kwawo), saka zvakandiomera kuti nditaure huremu hwehuwandu hwepamusoro. kuzviporofita izvi. Iyo thesis isingamiri muyedzo yekuramba zvakare haina kunyanyo shamisa kana ichiitika (shure kwezvose, pakanga paine zviporofita zvisina kunyatsoitika uye hapana aitya nazvo). Uyezve, zviporofita izvi pachazvo zvakatora chikamu mukuita kwacho (kuvonga kwatakadzokera kuno). Uporofita hunozadzika, chaizvoizvo.
29 Elul 09 - 2016/15/11 naXNUMX:XNUMX
Zvinoita kwandiri kuti Kikro inofanira kutaurwa / kunyorwa muchiHebheru. Zvakare, iko kutorwa kubva kuzita rake kwakabatana naPublius Trentius Ash.
Ah, handina kufunga kuti ichaburitswa nekukasira asi yaizotumirwa kumupepeti wesaiti. Unogona kudzima chirevo ichi nechakatangira ipapo.
Chokwadi zvinouya kwandiri, asi komputa yangu haidaire. Saka ndakabvumira chinyorwa chacho uye iye zvino bedzi ndakakwanisa kutumira mhinduro yangu ndoga. Ano:
Sei kubvisa? Tsinhiro mbiri dzinofanira kudzidza vose vaverengi vedu. Zvekutanga handina chokwadi nazvo. Zita muchiLatin ndiCicero, uye handisi kuona kuti sei mataurirwo ezita achifanira kuchinjwa. Kana mumwe munhu ari muUnited States anonzi David, ndinofanira kumudaidza nechiHebheru David. Handifunge kudaro.
Uye ndakanga ndisingambonzwisisi kuti sei ndishandure chiLatin C kuenda kutsoko yechiHebheru (saCaesar pachinzvimbo chaCaesar mune yepakutanga).
Pamusoro pechipiri, ndinokutendai zvikuru. Kwemakore ndaifunga kuti yakanga yakakombama. Iwe zvino wava shasha uye ane ruzivo rabhi.
Ndakatumirawo mhinduro yako yechipiri, asi ndiko kungoita zvine musoro. Kana iwe ukaona kuti yekutanga yakauya yakananga kunzvimbo (saka iwe waifunga), saka iwe unofanirwa kunge wakanzwisisa kuti yechipiri yakafanana. Sezvambotaurwa, ndakabvumidza zvese kurodha (ndiwo magadzirirwo esoftware kuti zvese zvinouya kwandiri). Ndinobvumira zvose, kunze kwezvinhu zvisina kufanira (izvo panguva ino BH yakanga isipo).
Tose tiri vaviri mumadzitateguru ( P. Property Torah, c):
Ani naani anodzidza mairi chitsauko chimwe kana halakha imwe kana ndima imwe kana nyuchi imwe tsamba imwe chete anofanira kumuremekedza nokuti takarayira Dhavhidhi mambo waIsraeri uyo asina kudzidza kubva kuna Ahitoferi asi zvinhu zviviri chete uye akaverenga murabhi wake mukuru uye akaziva. kuti zvakanzi Uye ruzivo uye kwete zvinhu zviri nyore uye zvinhu uye izvo David Mereki Yisrael uyo asina kudzidza kubva kuna Ahitoferi asi zvinhu zviviri chete zvinoverenga Rabbi Alufu nemuzivikanwi wake anodzidza kubva kumunyori wake chitsauko chimwe kana halakhah imwe kana ndima imwe kana nyuchi imwe tsamba imwe pane imwe kuti zvakadini uye kuremekedzwa kunofanira kuremekedzwa zvakadini Zvirevo XNUMX: XNUMX + Kudza vachenjeri vachagara nhaka + Shemu / Zvirevo / XNUMX Y + uye vanhu vasina mhosva vachagara nhaka yezvakanaka uye hapana chakanaka kunze kwoMutemo wakataurwa + Shemu / Zvirevo /XNUMXb
Uye zvakare muBM Lag AA:
Rega Rabbanan: Rabhi akati - Rabhi akadzidza njere, uye kwete Rabhi akadzidza Bhaibheri neMishnah, mashoko aRabhi Meir. Rabbi Yehuda vanoti: Zvose izvo huchenjeri hwake huzhinji hwakarurama. Rabbi Yossi anoti: Haana kana kuvhenekera meso ake kunze kwemishnah imwe chete - uyu ndiye rabhi wake. Raba akati: Zvakadai sarabhi wezvigadzirwa, Dasburn Zohma Listron.
Uye kuti zvakakodzera kuti mudzidzi adzime mashoko atenzi wake, shasha yake uye waanozivana naye?
Ndatenda zvikuru nekuda kwerumbidzo dzakawedzeredza zvishoma :). Zvimwe ndichatora kubva pano chidzidzo chekuti nditende maRabhi akawanda emakaunda. Ndinokutendai zvikuru nehurukuro dzenyu uye zvinyorwa zvakandizarurira musuwo munzvimbo dzakawanda, uye zvakapfumisa ruzivo rwangu mune dzimwe nzvimbo dzakawanda. Ndichazvidaidza kuti "uchapupu hunobva pachokoreti." 🙂), ndakawedzera maonero angu, uye dzimwe nguva akagadzira zororo remweya wangu.
Uye chaizvo nekuda kweizvi, ini handina kuda "kudzidzisa Halacha" kune rabhi. Uye ndakakarakadza kudzima, sezvo ndakafunga kuti kwaizova kwakakwana kururamisa muviri wechinyorwa kana rabhi akakuwana kwakakodzera, uye hazvina basa chitarisiko chemhinduro imene. Zvakare, sezvakataurwa, ndakanzwa kusagadzikana kunongedza newavy bhurashi kune kukanganisa, kana iko iko kukanganisa.
Sezvineiwo, kusvika pakuziva kwangu, mataurirwo echiLatin ndiwo cicero (muChirungu chemazuva ano, pamwe vanofunga vakamonyanisa). Mubvunzo kubva kuna David unoita dambudziko kana wasvika pazita rinozivikanwa kuti rakavamba asi richishandiswa zvakasiyana netsika dzakasiyana, uyezve unomutsa dambudziko pakushandiswa kwezita senhevedzano yezwi kana sezwi rinoshandisa izwi chinhu zvakare mune zvachinoreva. Asi zvinoratidzika kwandiri kuti zita remadunhurirwa rokuti Chitsro, kana richizivikanwa muIsrael, harina simba, uye harina kutakura mhosva yetsika zvokuti kushandiswa kwecicero kunenge kusinganzwisisike kuvanhu kana kuti kuchavatorera zvinoreva zita. . Zvinoratidzikawo kwandiri kuti maererano nemitemo yakagamuchirwa yekududzira nhasi kushandiswa kwechimiro cheTsizro kwakaderedzwa.
Kana zviri zvekunakidzwa zvine musoro, seuyo, sezvakataurwa, anofanirwawo kutenda nechikamu chakati wandei cheruzivo rwangu mumunda wepfungwa, ndinovimba ndadzidza zvakakwana kuti ndisazokundikana mune diki diki. Ndakafunga kuti mhinduro yangu yechipiri yaizoburitswa otomatiki, asi hapana imwe nzira yandaiziva yekutaura chishuwo changu chekuti wekutanga abviswe, kunze kwemhinduro yake, yandakataura kuti handitendi kuti iyo nzira yaive yekuti. kubudiswa pakarepo. Ndakafunga kuti pakupedzisira mumwe munhu aivimba neizvi aizovaona, uye chikumbiro chekudzima chichangobva kutaurwa.
Uye zvakare ndinokutendai zvikuru.
Itsika kubva kuna baba vangu mushakabvu (vakadzidza chiLatin) kuti kududzwa kwacho pakutanga kwaiva Tszero (naKesari). Pano, zvakare, pane shasha uye rabhi anoziva. 🙂
21th yeShivat 02 - 2017/14/43 paXNUMX:XNUMX
Iwe unotaura kuti kunyangwe iwe ukagona kutora chirevo chakawedzera kukosha kubva kune seti yemitemo, iwe hauna kusungwa nazvo.
Iniwo, ndine (kusvika pamwero wakati ndichiri kubata) maonero aya, uye nokudaro handinzwi ndichisungirwa kuechoes ethnocentrism kana chauvinism inobva kuchiJudha (uyezve, ndakanga ndiri - uye kusvika pamwero wakati ndichiri) kuita kududzira minimalism uye ndichiti pane Harisi "value statement" in halakhah. Hapana zvirevo zvinomuka zvachose - hazvina dambudziko kana zvakanaka; imwe nzvimbo yekuongorora).
Asi nguva pfupi yadarika ndakapfava uye ndinowanzo kubvuma zvimwe zvirevo zvekukosha zvingave zviripo mudzidziso (kuramba zvikwereti zvemubereko, chishuvo chehumambo, kugadzwa kweTembere, chishuvo chekuisa pasi munhu wese pasirese kuchiJudha), saka wandinozivana naye Funga Mwari. anoda kuti uite chimwe chinhu, nyangwe asina kukuraira zvakajeka, sei usingachiite (kureva kuti zvinhu zviviri zvachinja - 1. Ndakaona kuti chirevo chehukoshi chinokatyamadza chakauya 2. Ndakagutsikana kuti zvirevo kubva kuShittin ndezve kusunga).
Kana mubvunzo waive pamusoro pangu chete, ndakatadza kunzwa, asi varabhi vedu vakatoona kuti kuda kwaMwari kuri kuzvisungirira kwakasiyana neTorah - chisungo chekuteerera kumashoko evachenjeri sezvaanozivikanwa Iye ”(apo pakupedzisira Hasbra fungidziro yekujekesa kuda kwaMwari).
Ndiko kuti, mushure mekunge ndabvuma kuti kuda kwaMwari chinhu chinosunga, ndakakakavadzana kuti pfungwa dzevachenjeri - kunyanya mukuranga kwe'tsika' (kwete mupfungwa yehutsika hongu, asi semisangano yetsika) - chinhu chinosunga nekuti sezvavari shasha pakunzwisisa Haracha nekumira kuda kwaMwari.Pamusoro payo, vangangove nyanzvi pakunzwisisa kuti kuda kwaMwari chii (izvi ndezvakawanda muzvinyorwa zvekuravira kwemitzvo yevaRishoni kupfuura Tannaim naAmoraim, avo sezviri pachena havana kuedza kufungidzira dzidziso asi vakawanawo kutaura ukoshi hwakadaro nehwakadaro).
Uye zvino mweya wangu mumubvunzo wangu - une chikonzero here chekurega kuzadzisa kuda kwa Mwari sekuratidzwa kwazvinoitwa mumeso ako kubva mukucherechedza Torah?
Kana ndikakwanisa kutora chirevo chekukosha kubva muTorah inotarisirwa kwandiri. Uku ndiko kuda kwaMwari kunyangwe isiri Halacha chaiyo.
Asi chirevo chekukosha kubva kune sage hachisungiri. Mukuona kwangu, vachenjeri havasi nyanzvi (kwete sezvawakanyora). Chiremera chevachenjeri hachibvi muchokwadi chekuti vakarurama, asi kubva pakuti takagashira simba ravo (ona MaKs. Pane zvikonzero zvakanaka kwazvo zveizvi, asi hazvisi nekuti inyanzvi. Uye zvino iwe uchanzwisisa kuti isu takagamuchira simba ravo pane halakhic nyaya asi kwete pane meta-halakhic kana kukosha nyaya. Chete kana vafunga kubatanidza izvi mu halakhah (sekumanikidza padanho resodomy nezvimwe zvakadaro) zvinotisungira isu. Hongu, kana tikabvumirana navo, tichadaro, asi kana zvisina kudaro, hazvidikanwi kuita kudaro. Zvakasiyana, zvinodikanwa kuita zvakapesana chaizvo nekuti Hasbra ine inosunga chinzvimbo.
Uye izvo zvinodiwa naMwari hazvibvi kumisoro yemadzitateguru akavamba chimwe chinhu asi kubva kuGemara nevose vekutanga, uye zvinhu zvekare. Kunyangwe paine zvikanganiso zvakasiyana mune izvi zvakare, uye ona zvinyorwa pano pane saiti kuti uwane tsananguro: http://www.mikyab.com/single-post/2016/06/21/%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99
Uye zvimwe zvinhu
25 Sivan 06 - 2019/15/38 paXNUMX:XNUMX
BSD XNUMX muSivan A.T.
Panhaurirano pakati pevaRabhi panyaya yekutara zuva rekurangarira Holocaust - ona zvinyorwa zvaRabhi Shmuel Katz, 'Kuparadza nekurangarira' uye 'Zuva Rokutanga reHolocaust', uye chinyorwa chaRabbi Yeshayahu Steinberger, The Wound Before Healing. Vese vari vatatu pawebhusaiti 'Shabbat Supplement - Makor Rishon', uye mumhinduro dzangu kune zvinyorwa zviri pamusoro.
24 Kislev 12 - 2019/12/23 paXNUMX:XNUMX
Ndichakumbira ruregerero mberi ndiri kuverenga zviri pasaiti ino kekutanga uye handizive kana mibvunzo yangu kana mhinduro kwavari zvakabuda muzvinyorwa kana mumibvunzo yevakapindura pano.
1. Kana uchifunga kuti Mwari arega kupindira mune zviri kuitika munyika yedu, unogona kutsanangura muchidimbu pfungwa dzinokosha dzechiJudha dzakadai sokuti
B. Mubayiro uye Chirango - Zvinoita kwandiri kuti Maimonides (ndinonyora kubva mundangariro kwete kubva pakudzokorora mubhuku) anoti nzira yepanyama yenyika inoitwa semugumisiro wehunhu hwepachivande hwemaJuda sekuti uye ini ndakapa yako kunaya nenguva, nezvimwewo.
2. Unofunga kuti kunamata katatu pazuva kwave kusingaite nekuti hapana wekutaura naye? Izvo zvese zvasara ndeye halakhic charge iyo yakabviswa zvimwe chikonzero chikuru chekubvunza zvaunoda kubva kune mumwe munhu anogona kuvapa?
Zvinoita here kusiya Rosh Hashanah uko munhu wese ari munyika anopfuura pamberi pake sevanakomana vaMeroni?
4. Kukudzwa kwake anofunga uye handidi kuenzanisa Khu sekutaura kwavaifunga kuti Shiva akarara? Kana kuti akasiya nyika yake?
Kana zvinhu zvakatokurukurwa pamusoro pesaiti ini ndingafara kugadzirisa kune referenzi kune nzvimbo dzakakodzera kana nguva yako isingakubvumire kuti utaure.
Iwe unobvunza mibvunzo yakawanda yakafara uye zvinonetsa kugadzirisa pano. Uchawana dzidziso dzangu dzese pane idzi nedzimwe misoro muchikamu chitsva chetatu, uye pamisoro iyi mubhuku rechipiri (Hapana Munhu Anotonga MuMweya). Kupfuura izvozvo iwe unogona zvakare kutsvaga saiti pano uye uwane akawanda mareferensi kune yega yeiyi mibvunzo.
Chitatu muTammuz 25 - 06/2020/15 na19:XNUMX
1) Nezvekusafanana mukutonga kwaMaimonides nezvimwe zvakadaro, hazvinei nemeta-halakhah, asi tsananguro ye halakhah inoitwa neimwe nzira asi kutonga kwayo hakuna hukama (zvichida inogona akati hazvina hazvo hukama).
Semuenzaniso: "AR Acha Bar Hanina inoonekwa uye inozivikanwa pamberi peiye akataura uye aive nyika kuti hakuna mumwe muchizvarwa chaRabbi Meir saiye uye nei vasina kugadzira halakhah saiye kuti shamwari dzake dzaisagona kumira pa kuguma kwemafungiro ake aanotaura pamusoro pezvisina kuchena zvakachena uye anomuratidza chiso Tinoona kuti kunyange zvazvo vachenjeri vaiziva kuti rabhi akachenjera (uye zvichida kodzero yavo) haana kutonga pane halakhah seyake.
Uyewo pane peji rimwe chete ( Eruvin XNUMX :) chikonzero ndechokuti Halacha Kavah inopiwa kunyange zvazvo Shabash inorodzwa neTapi uye imhaka yekuzvininipisa kwavo uye hazviratidzi kwandiri kuti mumwe munhu anofunga kuti kuzvininipisa kunowanzotungamirira kune chokwadi. chokwadi (kunyangwe kazhinji Zvinhu zvichiwedzera kujeka uye kujeka).
Sekuona kwangu, zviri pachena kuti vanofunga (kusiyana nevanopokana ...) ve halakhah vakaenda nenzira yakajeka uye inowirirana, mushure mezvose, takawana vakati wandei vavo vaiwanzo kusatonga saivo uye mune mashoma mashoma vakatonga. saivo. Mune mamwe mazwi, hapana chirevo kuchirevo chekuti Maimonides haana meta-halakhic kuenderana nekuti pane zvinoreva mukutonga kune meta-halakhic.
2) Rabhi akasarudza nokuda kwechimwe chikonzero kuti chishamiso ndechokuti haana mukana wokuva asina kupindira. Unowana kupi tsananguro iyi?
Chishamiso chepfungwa yakadai ndechekuti kune chero munhu akambobata bhaibheri muruoko zviri pachena kuti kunyangwe mashura aivepo akatadza kuregererwa nekumukira (maererano naRabhi panguva yakaitika minana) uye kana tichiti minana. chinhu chisingagone kuitika ipapo takati zvizvarwa zvese izvo zvaive boka remapenzi (Don Ku uye izvo nhasi makumi ezviuru zvinotendeuka nekuda kwe "minana" yaBaba nevanyengeri uye kunyange kupfuura avo kune vanonamata vasingatadzi. kutya kurangwa vasina kuona kubva kwavari Ku son of Ku son avo panguva iyoyo vaive vasiri vatadzi)
Ndinofunga kuti chishamiso inguva yakaderera yenhamba inoitika uye saka kune mukana kune vanoramba (kunyangwe munguva yevaporofita) kuti izvi ndezvemuzvarirwo uye kwete zvishamiso. Sezvizviwo muchizvarwa chedu tine minana. (Ndiri kuziva dambudziko riripo panyaya iyi, nekuti zvinoonekwa kuti nekufambira mberi kwesainzi, zvinhu zvaimbonzi musangano nekuda kwekunzi hazvina simba nhasi tichaziva kuti zvakaitwa. Asi zvichiri zvinhu zvakawanda - apo the vanhu vanodzokera kunyika yavo
3) Mudzidzisi akanyora “Asi handifungi kuti vakapinda muhuchenjeri hwezvinoreva. Vavariro yaRabhi yakanga iri yokutaura kuti akanga ari muZionist wenyika, sezvakangoita Ben-Gurion. "
Kutenda kwedu kuna rabhi nekuisa zvinosetsa uye stand-up comedy mumashoko ake. Inopfavisa kuverenga….
(Handitendi kuti unotenda mune izvi).
Chitatu muTammuz 25 - 06/2020/15 na28:XNUMX
Ndawedzera pane zvese zvamanyora pano munzvimbo dzakasiyana.
1. Handichayeuki zvaaitaura (chii chisina kufanana). Asi maererano nemutongo weKnesset, ndakambotaura sehumbowo hwekuti halakhah haisi chokwadi nguva dzose asi ine kukosha kwekuzvimiririra (kutonga sezvandinonzwisisa kunyangwe mukuona kwangu ichi chisiri chokwadi). Panyaya yeBS neBH, vatauri vakapatsanurwa pane izvi. R.I. Karo mumitemo yeGemara anotsanangura kuti kuzvininipisa kwavo kunovatungamirira kuchokwadi (nokuti vakatanga vafunga nezvemashoko eB'Sh vasati vagadzira nzvimbo yavo pachavo) ndakawedzera izvi kuTuba mundima shomanana.
2. Mune izvi ndakawedzera Tuba mubhuku rechipiri mu trilogy (uyewo pano panzvimbo munzvimbo dzakawanda). Hakuna mhuka yakadai sechishamiso mukati mezvisikwa. Ani nani anotaura izvozvo anongovhiringika.
3. Handingotendi chete asi ndinogutsikana zvizere. Rabhi anobva kuPonivez akanga ari muZionist asingaiti zvechitendero.